February 2014 | ကမ်းလက်
နှစ်ချို့အမှတ်တရ (ဒီဇင်ဘာ ၂၈)
in ကမ်းလက် လပတ်လည်, သီဟနာဒ - on 2/28/2014 - No comments
၂၀၁၃ နှစ်ကူးချိန်တွေမှာ သီရိလင်္ကာကိုရောက်နေခဲ့ကြသည်။ ဂေါပကဥက္ကဋ္ဌ ရဲ့ သမီကြီး မေဓာ (လင်းမေစန်း) က ၂၀၁၃ ကို ပုဂ္ဂလိကရေးရာအရ ဘယ် လိုမြင်သလဲ၊ ကျရှုံးသလား၊ အောင်မြင်သလား လို့လာမေးသည်။
ထိုအချိန်က နားဝင်မချိုဟော့နေချိန်ဖြစ်သဖြင့် နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ အောင်မြင် တဲ့နှစ်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြတော့ သူမ မျက်လုံးပြူးသွားသည်။ မြန်မာလူထုက လီကွမ်းယုစကားတွေကို ဒီလောက်တန်ဖိုးထားပြီးဖတ်နေကြသောကြောင့်ဟု သူမကဆိုသည်။ ဒီလိုစာအုပ်တွေကို ဖတ်နေသူတွေကလည်း လူလတ်၊ လူ ငယ်တွေပိုများတယ်ဟုဆိုရာ သူမက အလေးပင်ပြုလိုက်သေးသည်။
" မြန်မာ တက်လာတော့မှာ သေချာတယ်" လို့လည်းဆက်ပြီး နိမိတ်ဖတ် သည်။ သူမအကြောင်းပြချက်က စင်္ကာပူ လူငယ်တွေ (လီကွမ်းယုစာအုပ် ရယ်မှမဟုတ်) စာကောင်းပေမွန် မဖတ်ကြတော့၊ ဆိုရှယ် နက်ဝါ့က်နဲ့ အချိန် ကုန်နေတယ်၊ ရင်လေးစရာ၊ မြန်မာအတွက် ဝမ်းသာတယ်လို့ သူမက ဆို သည်။ သူမက စထရိတ်တိုင်းမ်မှာ အလုပ်လုပ်နေသဖြင့် သူ့အတွင်းသတင်း က ခိုင်မာနိုင်သည်။
ပြောလိုသည်မှာ မြန်မာလူငယ်ထု (အများစု) သည် တံခါးဖွင့်လိုက်သည်နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစာတွေကို အသည်းအသန်ဖတ်လာကြသည်၊ ကုယ့်တံခါးတွေကို ကိုယ်တိုင်ဖွင့်လာကြ သည်။ အလွန်အားတက်စရာကောင်းသည်ဟုလည်း ယုံကြည်မိသည်။ အစိုး ရက သိပ်ကောင်းရင် သာမန်လူထုနဲ့ပင် နိုင်ငံတက်လာနိုင်သလို လူထုက သိပ်တော်လာရင်လည်း သာမန်အစိုးရလောက်နဲ့ပင် နိုင်ငံက တက်လာနိုင် သည်။ နှစ်ခုစလုံးဆိုရင်တော့ ပြောဖွယ်မလိုတော့ပါ။
အသိပညာဆည်းပူးလိုတဲ့ လူငယ်ထုနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ နိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်ဟာ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် မဖြစ်တန်ရာ။ အနာဂတ်ဟူသည် မရေရာသော်လည်း မြန် မာနိုင်ငံအနာဂတ်အတွက် မေဓာထောင်ပြခဲ့သောလက်မကိုမူ ကျွန်ုပ် ပိုင်ဆိုင် ခဲ့ပါသည်။ ဘယ်သူမှ လုယူလို့မရပါ။
ထိုနေ့က ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ဖြစ်ပါသည်။
Labels: ကမ်းလက် လပတ်လည်, သီဟနာဒ
အိန္ဒိယ၊ ဇာတ်စနစ် သံကွန်ခြာထဲမှာ (လေး)
in ဇင်ဝေသော်, လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင် (လီကွမ်ယု) - on 2/28/2014 - No comments
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကမ္ဘာ့ အမြင် (ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ အိန္ဒိယ)
မေး။ ။ အမေရိကန်နဲ့ အိန္ဒိယဆက်ဆံရေးကရော ဘယ်လိုဆက်ရှိနေမလဲ။ သူတို့ဆက်ဆံရေး ပိုမိုကောင်းမွန်လာမယ်လို့ ထင်မိပါသလား။
ဖြေ။ ။ အမေရိကန်တွေက တရုတ်နဲ့ရင်ဘောင်တန်းနိုင်တဲ့ နိုင်ငံကို လို ချင်နေတာဆိုတော့ သူတို့ဆက်ဆံရေးက အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ ရှိနေ မှာပဲ။ လူဦးရေ အရေအတွက် တရုတ်နဲ့ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်တာလည်း သူတို့ ပဲ ရှိတယ်။ အိန္ဒိယရဲ့ GDP က တရုတ်အောက်နည်းပေမဲ့ GDP ရဲ့ ရာခိုင်နှုန်းေ တ်ာတော်များများကို စစ်အင်အားအတွက် အိန္ဒိယတွေက အသုံးပြုတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့နေရာနဲ့သူ သုံးသင့်တယ် ထင်တယ်။ တရုတ်အမျိုးသမီးက အခု အာကာသထဲကနေ ပြန်လာပြီ။ အိန္ဒိယတွေ မလုပ်ရသေးဘူး။ သူတို့စွမ်းနိုင် တယ်ဆိုတာ သံသယမရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အချိန်တွေလိုအုံးမယ်။ စီးပွားရေး ထောက်ပံ့မှုတွေ လိုတယ်။ တရုတ်က အမေရိကန်တွေလုပ်နိုင် သမျှ သူတို့လည်း လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာပြဖို့ ပြင်ဆင်နေကြပြီ။
မေး။ ။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလေး နည်းနည်းမေးချင်လို့ပါ။ အိန္ဒိယ ကိုရောက်စဉ် နှစ်ခြိုက်သဘောကျစရာတွေရှိရင် ပြောပြပါလား။
ဖြေ။ ။ အိန္ဒိယကို မရောက်ဖြစ်တာတောင် အတော်ကြာပြီ။ နံပါတ်တစ်၊ သူ တို့က အင်္ဂလိပ်စကားပြောတယ်။ ဒီတော့ စိတ်ထဲမှာ နွေးနွေးထွေးထွေးရှိ တယ်။ နှစ်ကတော့ အိန္ဒိယအစားအစာ၊ သူတို့အစားအသောက်ကို ငါကြိုက်တယ်။
မေး။ ။ မစ္စတာလီက ငရုတ်သီးအစပ်ကြောက်တယ် မဟုတ်လား။
ဖြေ။ ။ စားဖိုမှုးကို ငရုတ်သီးလျော့ထည့်ဖိုပြောလို့ ရတာပဲ။ ငါမကြိုက်တာ ကတော့ ဟိုတယ်တွေဘေးမှာ အခင်းကြီး အခင်းငယ်ထိုင်ကြတာပဲ။ အိန္ဒိယ စီးတီးမှာရှိတဲ့ (India city) ဟော်တယ်အသစ် ရှယ်ရက်တန် (Sheratan) မှာတည်းနေတုံးက လမ်းဘေးမှာ ကိစ္စပြီးနေတဲ့လူတွေကို ရှင်းရှင်းကြီးမြင် ခဲ့ရဖူးတယ်။ အဲ့ဒါ သူတို့ဒီမိုကနေရစီ တဲ့။ တရုတ်ပြည်မှာဆိုရင် ဒါမျိုးတွေကို လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ တရုတ်ပြည်မှာ အိမ်ခြေယာမဲ့လူတန်းစားတွေ ဘယ်လောက်များသလဲဆိုတာတော့ ငါလည်း မသိဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီလို မြို့တော်ကြီးတွေမှာ အခင်းကြီး၊ အခင်းငယ်သွားတာကိုတော့ တရုတ်အစိုးရ က ခွင့်မပြုလောက်ဘူး။
in ကဗျာ, ဇင်ဝေသော် - on 2/27/2014 - No comments
ဘယ်လို ဒစ်ပလိုမေစီမှ ဆေးစွမ်းထက်မယ် မဟုတ်ဘူး။
သမိုင်းကနေ ထွက်ပြေးလို့ မရဘူး
in The Clash of Civilizations, ဇင်ဝေသော် - on 2/27/2014 - No comments
Political leaders can make history but they cannot escape history.
(The Clash of Civilizations P. 154)
"နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာ သမိုင်းကိုရေးနိုင်တယ် ဒါပေမဲ့ သမိုင်းကို ဖျက်ပစ်လို့တော့ မရနိုင်ဘူး"
ဆရာကြီးတွေအမြဲ ပြောတတ်တဲ့စကား၊ ဘယ်သူ့စကားမှန်း မသိခဲ့ဘူး။ အခုမှ မူပိုင်ရှင် ဟန်တင်တန်ကို ရှာတွေ့တယ်။
"သမိုင်းကို ဖျက်ပစ်လို့မရဘူး" ဆိုတာအပြင် "သမိုင်းကနေ ထွက်ပြေးလို့ မရဘူး" လို့ ဘာသာ ပြန်လိုက်ရင်လည်း သမိုင်း မရိုင်းနိုင်ဘူး။
in ပြုံးစိစိ - on 2/27/2014 - No comments
ငါးက လူကိုပြန်မျှားတယ်၊ ဖြစ်ရလေ ရှောင်လင်ကျောင်းသားရယ်။
ဒါရော The Clash of Civilizations လား မသိ
in The Clash of Civilizations - on 2/27/2014 - No comments
ဘုရားဆင်းတုတော်ကြီး ကျောက်သားအရောင်တင်ဖို့နဲ့ ရွှေသင်္ကန်းပြန်လည် ဆက်ကပ်ဖို့ဆိုပြီး တရုတ်နှစ်သစ်ကူးမှီ မန္တလေးက ရွာအဆက်ကောင် ကလေးကို လှမ်းခေါ်လိုက်သည်။ ရွာသားရိုးပုံက ပုဆိုးနဲ့ ထွက်လာသည်၊ အင်မီဂရေးရှင်းက အတွန့်တက်တော့ သူ့ခမျာ ရုံးခန်းရောက်လိုရောက်၊ လက်မှတ် အထိုးခိုင်းလို့ ထိုးခဲ့ရ။ ဘုရားဆင်းတုကြီးပေါ် ဆင်းလိုက် တက် လိုက် ပုဆိုးကြီးနဲ့တော့ တော်မည်မထင်၊ ဘောင်းဘီလေး ဘာလေးပြောင်း ဝတ်ပါဆိုပြီး ဒကာတစ်ယောက်ကို အကူအညီတောင်းပြီး အဝယ်ခိုင်းရသည် ။ ငေါက်ပြီး အဝတ်ခိုင်းခဲ့ရသည်။ ဆရာသမားက အစတော့ ရှက်သလိုလို ဘာလိုလို။ တစ်ပတ်ကျော်တော့
"မင်းကွာ ဘောင်းဘီကြီး တကားကားနဲ့ မြန်မာဆန်ဆန် ပုဆိုးလေးဘာလေး ဝတ်ပါအုံး" စသလိုလိုပြောမိတော့
"ပုဆိုးကတော့ ဒီကရှေ့ မဝတ်တော့ဘူး" တဲ့။
ဒါက The Clash of Civilizations လား မသိ။
Labels: The Clash of Civilizations
in The Clash of Civilizations, အမှတ်တရ - on 2/26/2014 - No comments
"တပည့်တော်အသက်ရှင်နေသရွေ့ ရဟန်းဝတ်နဲ့ မြင်တွေ့ပါရစေ" ဆိုခဲ့တဲ့ မယ်တော်ကြီး ဒေါ်သိန်းညွန့်.....
"အင်္ဂလိပ်စာသင်ကွာ ပြီးရင် (သိန်းဖေမြင့်တို့လို) ဘုန်ကြီးကျောင်းသား စာရေးဆရာဖြစ်အောင်လုပ်ကွာ(ကွန်မြူနစ်တော့ မဖြစ်စေနဲပေါ့)" ဆိုခဲ့တဲ့ အဖေ ဦးစိန်ဆင့်...
သွားလေသူ မိဘနှစ်ပါးရဲ့ "ဆန္ဒ ပဋိပက္ခ"ကို "လူ့ယဉ်ကျေးမှုပဋိပက္ခ" နှစ်အုပ်တွဲနဲ့ ရိုကျိုးစွာ ကျေးဇူးဆပ်ပါတယ်။
လူ့ယဉ်ကျေးမှုပဋိပက္ခနဲ့ ကမ္ဘာသစ်တစ်ခုကို ပုံဖော်ခြင်း
၁၉၉၂ - ခု ဇန်န၀ါရီလ (၃)ရက် မော်စကိုမြို့ရှိ အစိုးရဆွေးနွေးခန်းမကြီး ထဲမှာ ရုရှားနဲ့ အမေရိကန် ပညာရှင်ကြီးတွေဟာ အတူတကွ စည်းဝေးနေ ခဲ့ကြပါတယ်။ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကြီး ပြိုကွဲပြီး နှစ်ပတ်အကြာမှာ ရုရှား ဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံဟာ လွတ်လပ်တဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ပေါ်ထွက်လာ ခဲ့ပါတယ်။ ဒါရဲ့ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ကတော့ တစ်ချိန်က ခန်းမကြီးထဲမှာ ခန်းခန်းနားနား ရှိနေခဲ့တဲ့ လီနင်ရဲ့ ရုပ်တုကြီးကို ဖယ်ရှားပြီး ရုပ်တုအစား ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း နိုင်ငံတော်ရဲ့ အလံကို ခန်းမရှေ့ တံတိုင်းပေါ်မှာ လွှင့်ထူ လိုက်နိုင်ကြခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမေရိကန် တစ်ယောက်ကသာ သ တိထားလိုက်မိတဲ့ အချက်တချက် ရှိနေခဲ့တယ်။ အဲဒါကတော့ အလံကို ဇော က်ထိုး လွှင့်ထူလိုက်မိခြင်းပါ။ ရုရှားတစ်ယောက်ကို ပြောပြလိုက်တော့မှ လူ မသိစေဘဲ အမြန်ပြန်ပြင်ပြီး လွှင့်ထူခဲ့ကြပါတယ်။
စစ်အေးတိုက်ပွဲကြီး ပြီးဆုံးပြီးတဲ့နောက် လူတွေရဲ့ အိုင်ဒင်တတီနဲ့ အမှတ် အသားတွေဟာ သိသိသာသာကြီး ပြောင်းလဲလာနေခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့နိုင် ငံရေး ကိုယ်တိုင်ကလည်း ယဉ်ကျေးမှု အသီးသီးနဲ့ ယှဉ်တွဲပြီး ပေါ်ထွက်လာ ခဲ့ပါတော့တယ်။ ဇောက်ထိုးဖြစ်နေတဲ့ အလံဟာ ကူးပြောင်းဆဲ ကာလရဲ့ သင်္ကေတ တစ်ခုသာ ဖြစ်နေခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ အလံတွေက ပိုများ၊ ပိုမြင့် လာခဲ့ပါတယ်။ ဇောက်ထိုးဖြစ်နေတဲ့ အလံတွေရယ်လို့ မရှိတော့ပါဘူး။ ရုရှားအပါအ၀င် အခြားအခြားသော လူမျိုးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အိုင်ဒင်တတီ အမှတ်အသား အသစ်တွေကို မွေးမြူ စွဲကိုင်လာခဲ့ ကြပါတော့တယ်။
၁၉၉၄ - ခု ဧပြီလ (၈) ရက်နေ့မှာ ဆာရာယေဗိုက လူပေါင်းနှစ်ထောင်ကျော် ဟာ ဆော်ရီအာရေးဗျနဲ့ တူရကီ အလံတွေကို ကိုင်ဆောင်ပြီး ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါ တယ်။ ကုလသမဂ္ဂအလံ၊ နေတိုးအလံ၊ အမေရိကန်အလံတွေ အစား အဲ
ဒီနှစ်နိုင်ငံရဲ့ အလံတွေကို ကိုင်ဆောင်လာခြင်းက သူတို့ဟာ မွတ်စလင်ေ တွ ဖြစ်တယ်။ သူတို့ရဲ့ မိတ်ဆွေ အစစ်တွေက ဘယ်သူတွေ၊ မိတ်ဆွေ မစစ်တာက ဘယ်သူတွေ ဆိုတာ ကမ္ဘာကို ပြသလိုက်တာပါပဲ။
၁၉၉၄ - ခု အောက်တိုဘာလ (၁၆) ရက်နေ့မှာတော့ လူပေါင်း ခုနှစ်ထောင်ေ ကျာ်ဟာ မက္ကဆီကို အလံတွေကို ကိုင်ဆောင်ပြီး အခြေခံဥပဒေ မူကြမ်း (၁၇၈)ကို မကျေနပ်လို့ လော့စ်အိန်ဂျလိမြို့မှာ ဆန္ဒပြခဲ့ ကြပြန်ပါတယ်။ အခြေခံ ဥပဒေမူကြမ်းအရ တရားမ၀င် ၀င်ရောက်နေထိုင် သူတွေရဲ့ သား သမီးတွေဟာ အစိုးရက ပေးတဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို မရနိုင်ပါဘူး။
“သူတို့ကို အခမဲ့ ပညာသင်ပေးနေတဲ့ နိုင်ငံထဲမှာနေပြီး ဒီလူတွေက ဘာကြောင့် မက္ကဆီကို အလံကို ကိုင်ပြီး လမ်းပေါ်တက် ဆန္ဒပြနေကြတာလဲ၊ သူတို့ကိုင်သင့်တာက အမေရိကန် အလံပဲ” လေ့လာသူ တစ်ယောက်က မေးခွန်း ထုပ်ခဲ့ပါတယ်။
သူပြောပြီး နှစ်ပါတ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ သူတို့က အမေရိကန် အလံကို ကိုင်ပြီး ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အလံက ဇောက်ထိုးပါ။ အဲဒီအလံ ဇောက်ထိုးကပဲ သူတို့ကို ၁၇၈- ဥပဒေမူကြမ်း အောင်ပွဲကို ပေး လိုက်တာပါ။ ကာလီဖိုးနီးယား မဲဆန္ဒရှင်တွေက ၅၉- ရာခိုင်နှုန်း ထောက် ခံပေးပြီး အဲဒီ ဥပဒေလည်း အတည်ပြုလိုက်ရပါတော့တယ်။
စစ်အေးတိုက်ပွဲကြီး အပြီးမှာ အလံတွေ၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ သင်္ကေတေ တွဟာ တော်တော်ထိရောက်မှု ရှိလာပါတယ်။ သင်္ကေတ ဆိုရာမှာ ကြက်ခြေခတ်တွေ၊ လခြမ်းတွေ၊ ခေါင်းမြီးခြုံခြင်းတွေတောင် ပါဝင်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ လူအများစုအတွက် ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ သင်္ကေတတွေဟာ အဓိပ္ပါယ် အရှိဆုံး အရာတွေ ဖြစ်လာခဲ့လို့ ပါပဲ။ အခုတော့ လူတွေဟာ အသစ် ဒါပေမဲ့ ရန်သူဟောင်းတွေနဲ့ တိုက်ပွဲတွေဆီ ဦးဆောင်ေ ပးခဲ့တဲ့ ယုံကြည်မှုအသစ် ဒါပေမဲ့ အရင်က အလံဟောင်းတွေကိုပဲ ကိုင်ဆော င်ပြီး အသစ်ဆိုပေမဲ့ ရှေးဟောင်း အိုင်ဒင်တတီတွေကို ပြန်ရှာတွေ့လာ ကြ ပါတော့တယ်။
စာရေးဆရာ မိုက်ကယ် ဒစ်ဗဒင် (Dibdin) ရဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ “Dead lagoon” ၀တ္ထုထဲက စာသားတွေဟာ လက်ရှိ အခြေအနေ အပေါ် အတိအကျ ထင်ဟပ်စေပါတယ်။ “ရန်သူအစစ် ဆိုတာ မရှိဘဲ မိတ်ဆွေ အ စစ်ဆိုတာ မရှိနိုင်၊ ကိုယ်နဲ့မတူသူတွေကို မမုန်းတီးမိဘူးဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ် ကိုလည်း မချစ်သေးပါဘူး” ဒါတွေဟာ ရှေးဟောင်းအမှန်တရားတွေ ဖြစ်ပေမဲ့ ရာစုတစ်ခု ကျော်ပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ ကြေကွဲဖွယ် ဒီအမှန် တရားတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်တွေ့နေကြရပြန်ပါတယ်။ “ ဒါတွေကို ညင်းဆန်သူဟာ မိသားစုကို ညင်းဆန်သူ၊ ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်ကို ညင်းဆန်သူ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ မွေး ရာပါ အခွင့်အရေးနဲ့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ညင်းဆန်သူတွေပါ” တဲ့။
ကြေကွဲဖွယ် ရှေးဟောင်း အမှန်တရားတွေကို နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေ၊ ပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင် မျက်ကွယ်ပြု မထားနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ်ပိုင်အမှတ် အ သားတွေ ပြန်လည် တွေ့ရှိဖို့နဲ့ လူမျိုးစု စိတ်ဓါတ်တွေကို ပြန်လည် အသက် သွင်းဖို့ ရန်သူဆိုတာ ရှိကို ရှိနေကြရပါတော့တယ်။ ဒီခေတ်မှာ အန္တရာယ် အကြီးဆုံး မုန်းတီးမှုဟာ မတူညီတဲ့ ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှု နှစ်ခုကြားက သတ် မှတ်ချက် အမှားအယွင်းကနေ ပေါက်ဖွားလာပါလိမ့်မယ်။
ဒီစာအုပ်မှာ ဆွေးနွေးမယ့် အကြောင်းအရာတွေဟာ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ယဉ်ကျေး မှု အမှတ်အသားတွေက စစ်အေးတိုက်ပွဲကြီး အပြီးမှာ လူအဖွဲ့အစည်းတွေကို ဘယ်လို ပေါင်းစည်းပေးတယ်၊ ဘယ်လို ခွဲခြားပေးတယ်၊ ဘယ်လို ပြဿ နာတွေကို ပုံဖော်ပေးလိုက်တယ် ဆိုတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပါတယ်။ ဒါတွေကို ရှင်းပြဖို့ အခန်း (၅) ခွဲခြားပေးထားပါတယ်။
( အမှာ၊ ဘာသာပြန်ဆိုရာမှာ Culture ကိုပဲ ယဉ်ကျေးမှုလို့ ပြန်ဆိုပြီး Civilization ကိုတော့ စီဗီလိုက်ဇေးရှင်းလို့ပဲ သုံးစွဲပါမယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုရင် ရှေ့မှာ စီဗီလိုက်ဇေးရှင်း အကြောင်းကို သီးသန့် ရှင်းလင်းပေးဥိးမှာ မို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာပြန်သူ)
လက်ရှိ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးဟာ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဗဟုမဏ္ဍိုင်၊ ဗဟုစီဗီလိုက်ဇေးရှင်း ဖြစ်လာနေပါတယ်။ ခေတ်စနစ်သစ်ကို ပုံဖော် လာနေမှုဟာ အနောက်တိုင်းဝါဒနဲ့ မတူညီပါဘူး။ တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှုကို မွေးထုပ်ပေးလိုက်တာ မဟုတ်သလို အနောက်မဟုတ်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေ ကြားက အနောက်ယဉ်ကျေးမှုလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
စီဗီလိုက်ဇေးရှင်းတွေ ကြားက ပါဝါချိန်ခွင်လျာဟာ ရွေ့လျော လာနေတယ်။ အနောက်တိုင်း လွမ်းမိုးမှု ဆုတ်ယုတ်လာနေတယ်။ အာရှ စီဗီလိုက်ဇေး ရှင်းတွေဟာ သူတို့ စီးပွားရေး၊ စစ်အင်အား၊ နိုင်ငံရေးပါဝါတွေ ချဲ့ထွင် လာနေပါတယ်။ အစ္စလာမ် ဆိုရင် များပြားလွန်းတဲ့ လူဦးရေ မွေး ဖွားနှုန်းနဲ့ သူတို့ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေကို မငြိမ်မသက် ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော် ပေးနေ ပါတယ်။ နောက်ပြီး အနောက်မဟုတ်တဲ့ စီဗီလိုက်ဇေးရှင်း တိုင်ဟာ (non-western civilization) သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ယဉ်ကျေးမှု တန်ဖိုးတွေ ကို ပြန်လည် အသက်သွင်းလာနေကြတယ်။
စီဗီလိုက်ဇေးရှင်းကို အခြေခံတဲ့ ကမ္ဘာ့လမ်းစဉ် ပေါ်ထွက်လာေ နတယ်။ လူအဖွဲ့အစည်းတွေဟာ သူတို့နဲ့ ယဉ်ကျေးမှု တူညီတဲ့ အခြားအဖွဲ့ အစည်းတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းလာကြတယ်။ လူအဖွဲ့အစည်းကို စီဗီလိုက်ဇေးရှင်း တစ်ခုကနေ နောက်တစ်ခုဆီ ပြောင်းလဲပေးဖို့ အားထုတ်ခြင်းဟာ မအောင်မြင်ဘူး။ နိုင်ငံတွေဟာ သူတို့ချင်း အုပ်စုတူရာတွေ ဖွဲ့စည်းပြီး နေ ထိုင်လာနေကြတယ်။
အနောက်ရဲ့ ဟန်ဆောင်ထားတဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှုဝါဒ ဟာလည်း အခြား စီဗီလိုက်ဇေးရှင်းတွေကြားမှာ ပြဿနာတွေပဲ မွေး ထုပ် ပေးနေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အစ္စလမ်နဲ့ တရုတ် စီဗီလိုက်ဇေးရှင်းေ တွကြားမှာပါ။ ပြည်တွင်းစစ်တွေ၊ မွတ်စလင်တွေနဲ့ မွတ်စလင် မဟုတ် သူတွေကြားက စစ်ပွဲတွေဟာ နယ်ခြားစည်းတွေကိုပါ ခြိမ်းခြောက် လာနေတော့ နီးစပ်ရာ နိုင်ငံတွေခြင်း ပေါင်းစုပြီး ဒါတွေကို ဟန့်တားနိုင် ဖို့ ပြင်ဆင်နေကြရပါတယ်။
အနောက်ယဉ်ကျေးမှု ဆက်လက်ရှင်သန်နေဖို့ အမေရိကန်တွေရဲ့ ယုံကြည် ချက် အပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်။ သူတို့ယုံကြည်မှု ဆိုတာ အနောက်တိုင်း အိုင်ဒင်တတီနဲ့ အနောက်တိုင်းသားတွေ လက်ခံတဲ့ စီဗီလိုက်ဇေးရှင်းကို မတူ ထူးခြားမှု အနေနဲ့ လက်ခံယုံကြည်မှုမျိုး၊ ဒီစီဗီလိုက်ဇေးရှင်းဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာ စီဗီလိုက်ဇေးရှင်း မဖြစ်နိုင် ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုမျိုးပါ။ ဒီယုံကြည်မှုမျိုး ထားရှိပြီး အနောက်မဟုတ်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေ (non- Western societies) ဆီက ရောက်ရှိလာမယ့် စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်နိုင်အောင် ပြန် လည်ပြင်ဆင် အင်အားဖြည့်ထား ကြရပါလိမ့်မယ်။ စီဗီလိုက်ဇေးရှင်းကို အခြေခံတဲ့ စစ်ပွဲကြီးတွေကို ရှောင်ကြဉ်နိုင်ဖို့ဟာ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ အနေနဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးရဲ့ ပေါင်းစု စီဗီလိုက်ဇေးရှင်း သဘာဝကို လက်ခံပြီး အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း အပေါ်မှာ ပူတည်နေပါတယ်။
Labels: The Clash of Civilizations, အမှတ်တရ
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 2/25/2014 - 1 comment
၀ိုင်းကားဝိုင်း၏ ။ အ၀န်းကားမတူညီကြ ။ အချို့ကကြီး၍ အချိူ့ကသေး၏ ။ တနည်းဆိုရသော် ပြန့်ကားခြင်းနှင့်ေ၀၀ါးခြင်း ၊ သေးငယ်ခြင်းနှင့် စုစည်းကျစ်လစ်မှုသဘော ။ ကောင်းကြပါ၏ ။ သူ့အထာနှင့်သူကောင်းကြပါ၏ ။ ( No One or Nothing is Perfect ) ဟုခပ်တည်တည် ကွန်မင့်ပေးလိုသူများပေးနိုင်၏ ။
ဘ၀၏ အနှစ် (၂၀) ကျော်ကာလကို ခြင်္သေ့လည်ပြန်ကြည့်မိ၏ ။
အပြင်စာမဖတ်ရ ၊ မဂ္ဂဇင်း ၊ ဘာသာပြန် ၊ သတင်းစာ ၊ ရေဒီယို ၊ ကက်စက် မဖွင့်ရ ၊ နားမထောင်ရ ။ နေ့စဉ် နေ့တိုင်းပါဠိတော် ၊ အဋ္ဌကထာ ၊ အင်္ဂုတ္ထိုရ် ၊ ၀ိနည်း ငါးကျမ်း ၊ ဓမ္မပဒတို့ဖြင့်ဘ၀သည် သိုသိပ်စွာ ကျစ်လစ် နေခဲ့၏ ။ ကျဉ်းမြောင်၏ ။ သို့သော် ငြိမ်းချမ်း၏ ။ စုစည်းမိ၏ ။
သတ်မှတ်ထားသော စာမေးပွဲများပြီး၏ ။ဆရာများက လွှတ်ပေးလိုက်၏ ။ စာသင်၏ ၊ ကဗျာဖတ်၏ ၊ မဂ္ဂဇင်း အစုံဖတ်၏ ။ စာဖတ်ရခြင်းသည်ပေါ့ပါး၏ ။ ဘုရားစာသင်ရတာလောက်မခက် ။ များများလည်းမရေးနိုင်ကြ ။ စာရေးဆရာများ၏ စာအုပ်ကိုငန်းသတ်ဖတ်လိုက်လျှင် ရက်အနည်းငယ်အတွင်းကုန်သွား၏ ။ ငယ်သေး၍ စာကြည့်တိုက်ကိုမရောက်သေး ။ စာအုပ်အငှားဆိုင်သာ ရောက်၏ ။ ထိုစာအုပ် ဆိုင်၌ရှိသော ၀တ္ထု ၊ ဘာသာပြန်စာအုပ်များအားလုံး (၆) လအတွင်းအကုန်ဖတ်လို့ရ၏ ။
ဆိုလိုသည်မှာ ဘ၀ သည်(သို့) ဘ၀ အမြင်သည် ပြန့်ကားလာသည်နှင့်အမျှ လျော်ကြေး တခုပြန်ပေး လိုက်ရ၏ ။ အမြင်သည်ေ၀၀ါးလာ၏ ။ဆုံချက်ဗဟိုများ ပြောင်းလာ၏ ။ ကြည်လင်နေသော (၄) လက်မ ဓာတ်ပုံကို (၁၂) လက်မချဲ့လိုက်သည်နှင့် ဆင်ဆင်တူ၏ ။ ပြန့်ကားတိုင်းေ၀၀ါးတာမဟုတ်ဟု ခပ်တည်တည် ကွန်မင့်ပေးလိုကပေးနိုင်၏ ။)
လွန်ခဲ့သောအနှစ် (၂၀) က ဘ၀နှင့် ယနေ့ဘ၀ကိုယှဉ်ကြည့်မိ၏ ။ ဟိုအရင်ဘ၀က အဆများစွာပို၍ ငြိမ်းချမ်း၏ ။ ယနေ့ဘ၀က ပညာမဟုတ်သောသညာတို့ဖြင့်ဖောင်းကားနေ၏ ။ သို့သော် ထိုဘ၀နှစ်ခုကို လဲချင်၍မရ ၊ ရသော်လည်း မလဲချင်။
အတန်ငယ် ကြာလာသောအခါ အင်္ဂလိပ်စာသင်၏ ။ ထိုထက်ကြာလာသောအခါ အင်္ဂလိပ်စကားပြော၏ ။ အင်္ဂလိပ်စာအုပ် ဖတ်၏ ။ တတ်တော့မတတ် ။ မတတ်လဲဖတ်လို့ရသည် ။ ကြာတော့မတတ်သော်လည်း နားလည်လာ၏ ။ အင်္ဂလိပ်စကားပြော၏ ။ မှန်တော့မမှန်။ မမှန်လဲပြောလို့ရ၏ ။ ပြောရင်းဖြင့် အတန်ငယ် မှန်လာ၏။
ထိုအခါ ဆက်ဆံရသော ၀န်းကျင်ပြောင်းလာ၏ ။
ယခုနှစ်ဦးပိုင်းကိုထည့်မတွက်လျှင် ဘ၀၏ ဆယ်စုနှစ်တစုလုံး မိမိလူမျိုးများနှင့်ဆက်ဆံရသည်ထက် လူမျိုးခြားနှင့်ဆက်ဆံရသည်က အဆများစွာပိုများ၏ ။ ထိုအခါ ဘ၀သည် (သို့) ဘ၀အမြင်သည် ပို၍ပြန့်ကားလာတော့၏ ၊ ပို၍ေ၀၀ါးလာသည်ဟုလည်းထင်၏ ။ (၁၈) နှစ်သားသာမဏေဘ၀လောက် မငြိမ်းချမ်းတော့ ။ ပညာမဟုတ်သောသညာတို့ကြောင့် ဖြစ်၏ ။
သို့သော် သညာသည် အကုသိုလ်စေတသိတ်မဟုတ်။ ပကိဏ်းဖြစ်၏။ ပကိဏ်းဖြစ်၍ ကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်၏ ။ အကုသိုလ်လဲဖြစ်နိုင်၏ ။
ထို့နောက် အင်တာနက်သုံး၏ ။ အင်တာနက်၏ပြန့်ကားခြင်းသည် အဆုံးမရှိဟုပင်ထင်ရ၏ ။ ဘ၀သည် ဤမျှအထိ ပြန့်ကားလာသောအခါ . . . . . . . . . . . .
အမှတ်တရအဖြစ်ဆုံး သတင်းတပုဒ် စထရိတ်တိုင်းတွင် ဖတ်လိုက်ရ၏ ။အမျိုးသားများက ဆန္ဒပြကြ၏။ အကြောင်းကားအမျိုးသမီးများအတွက် လိင်ဖျော်ဖြေသောပစ္စည်းသာရှိပြီး အမျိူးသားများအတွက်မရှိ ၊ လိင်ခွဲခြားသည်ဟု ယူဆသောကြောင့်ဟုဆို၏။
ဘုရားဘုရား... ရဟန်းတပါးနှင့် ဤသတင်းမျိူးဘာဆိုင်သနည်း ၊ ဆိုင်ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင် ဖတ်ကား ဖတ်လိုက်မိပြီ ။ ဖတ်ပြီးသားကို မဖတ်ရသေးလုပ်မရ ၊ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ကြည့်လျင် ရှက်စရာတော့မဟုတ် ။ ဘုရားရှင်၏ ၀ိနည်းတော် ၌ပင် ဤကိစ္စများပါဝင်၏ ။ ဘ၀နှစ်ခုကိုပြန်ယှဉ်မိ၏။
လွန်ခဲ့သောအနှစ် (၂၀) ကျော်က သာမဏေတစ်ပါးဆိုလျှင် မျက်နှာကြီးနီရဲသွားပြီး ထိုသတင်း စာကိုလွှင့် ပစ်ကောင်းလွှင့်ပစ်ပေလိမ့်မည်။
အကြောင်းကား ရိုးသားသောထိုသာမဏေသည် " ဤသတင်းစာသည် သာမဏေများသာဖတ်ရန် မဟုတ်" ဟူသည်ကိုသဘောမပေါက်သေးသောကြောင့်ဖြစ်၏ ။ ရဟန်းများအတွက် ရေးခြင်းမဟုတ် ။
(၂၁) ရာစုရဟန်းကဤသတင်းအတွက် ဘာမှမဖြစ်တော့ ၊ ပြုံးပင်ပြုံးမိသေး၏ ။ ဟုတ်ပေသားပဲ ၊ လူသည် လူ့ဆန္ဒကိုဖော်ထုတ်ခွင့်ရှိသည်။ (နော်ဝေးမှာဖြစ်လျှင်ဟုတော့ ပြောရမည်ထင်သည် ၊ ထိုဆန္ဒ ပြမှုသည် နော်ဝေ၌ဟု ထင်သည်။) သူတို့တင်ပြသောအကြောင်းကလည်း မှန်ကောင်းမှန်နေလိမ့်မည် ။ (ရိုးသားစွာ ၀န်ခံရလျှင် ထိုရှိမရှိကိစ္စကိုတော့မသိပါ။)
နောက်တခု ထုတ်ဆိုဦးအံ့ ။
သူ့ဇနီးနှင့်အတူယှဉ်တွဲလာပြီး ၀ိပဿနာတရားပြတတ်သည့် ဆရာကြီးဦးဂိုအင်ကာကို နှစ်ဝါသာ ရသေးသော ရဟန်းက ကြည့်၍မရ ၊ အကြောင်းကား ၀ိပဿနာနှင့် ဦးဂိုအင်ကာ၏ဇနီး မဆိုင်ဟု ထင်နေသောကြောင့်တည်း ။
ယနေ့ (၂၁) ရာစု ရဟန်းကားဦးဂိုအင်ကာကို လေးစားကြည်ညိုနေမိ၏ ။ သူသည် သူ့ဇနီးကိုအိမ်မှာ ဖွက်ထားပြီး ကိလေသာကုန်နေသူလိုလို ဟန်မဆောင်သောကြောင့် ဖြစ်၏ ။ ဇနီးဘေးမှာထားပြီး ၀ိပဿနာ တရားပြလို့ရ၏ ။ ထိုမျှမက ဇနီးရှိသူလင်သားရှိသူများလည်း ၀ိပဿနာကို အားထုတ်လို့ရ၏ဟု ဘ၀ နေနည်းထိုင်နည်း (LIFE STYLE) ကိုပါ ပြနေသောကြောင့်ဖြစ်၏ ။
ကောင်းတော့ မကောင်း ၊ မေးတော့မေးရမည်။
"ဗုဒ္ဓဘာသာ" ဟူသောအမည်သည် ဘုရားပေးသော အမည်မဟုတ် ။ လူပေးသော အမည်ဖြစ်သည် ၊ ဘုရားပေးသောအမည်သည် “ဓမ္မ” ဖြစ်သည် ။ ကမ္ဘာနှင့် “ ၀ိနယ" မဆိုင် ။ ဦးဂိုအင်ကာသည် “ဓမ္မ” ကိုဖြန့်သူဖြစ်သည် ။ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဖြန့်သူဟုတ်ကောင်းဟုတ်မည်၊ ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မည်။ သို့သော် ဗုဒ္ဓဘာသာကို အသိုသိပ်ဆုံးနည်းဖြင့် ဖြန့်သူဟုတော့ယုံကြည်၏ ။ (ဤယုံကြည်မှုကို သံသယရှိသူများကို လည်းထပ်ရှင်းနေရန် ၊ တုန့်ပြန်ရန်မလို ။)
ယနေ့(၂၁) ရာစုရဟန်းအများစုသည် ပြန့်ကားလာကြ၏ ။ေ၀၀ါးလာကြ၏ ။ လွတ်လပ်လာကြ၏ ။ စည်းဘောင်ကို သိပ်မကြိုက်ကြတော့ ။ သြတ္တပ္ပထက် ဟိရိကိုလေးစားလာကြ၏ ။ သြတ္တပ္ပ ဟူသည် ကြောက်၍ ရှောင်သည် ၊ ကြောက်၍ လုပ်သည် ။
ဟိရိသည် ရှက်၍ရှောင်သည် ၊ ရှက်၍လုပ်သည်။ သိပ်မကြောက်တော့သည့်အတွက် လုပ်စရာပေါလာကြ၏။ ပြောစရာပေါလာကြ၏ ။ ကောင်းကားကောင်း၏ ။ ကောင်းလည်းမကောင်း ။ ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်း ကောင်းသည်ဟုသဘောထားလိုက်ကြ၏။
*ရေပေါ်၌ ကိုယ်ဖော့နိုင်လျှင် ထိုရေမည်မျှနက်ခြင်းမနက်ခြင်းသည်ပြသနာမဟုတ် ။
ဒူးဆစ်မမြုပ်သောရေ၌ ရေနစ်သေသူတွေ့ဖူး၏ ။
အိန္ဒိယ၊ ဇာတ်စနစ် သံကွန်ခြာထဲမှာ (သုံး)
in ဇင်ဝေသော်, လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင် (လီကွမ်ယု) - on 2/24/2014 - No comments
"အိန္ဒိယရဲ့ ပြဿနာက အိမ်၊ ပညာရေး၊ စာသင်ကျောင်းနဲ့ လူနေမှု အဆင့် အတန်းပဲ။ တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင် ကျောင်းမရှိလို့ ဆရာတွေက သစ်ပင်ေ အာက်မှာ စာသင်ပေးကြရတယ်။ ဒီတော့ လူဦးရေများနေလည်း ပညာ မ တတ်တဲ့လူတွေတိုးတာတာပဲ အဖတ်တင်မှာပေါ့"
မေး။ ။ အိန္ဒိယရဲ့ မတူညီကွဲပြားမှုတွေအကြောင်းကို မစ္စတာလီ ပြောခဲ့ တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာသာစကား၊ ဇာတ်စနစ်တွေမပါဝင်ဘဲ ဂန္ဓီတို့၊ နေရူး တို့ နောက်မှာ အားလုံးညီညီညွတ်ညွတ် ထောက်ခံခဲ့ကြတာမဟုတ်လား။
ဖြေ။ ။ အဲသလိုမဟုတ်ဘူး။ ညီညီညွှတ်ညွှတ်ရှိတယ်ဆိုတာ ညီညွှတ်ရ မယ့်အကြောင်းနောက်ခံ ရှိနေလို့။ ဂန္ဓီက ဆားအခွန်ကို ဆန့်ကျင်တော်လှန် ခဲ့တယ်။ ဒါ့ကြောင့် လူတွေကြားမှာ သူက အိုက်ကွန်ဖြစ်ခဲ့တာ။ နေရူးက ပထ မဆုံး တစ်သီးပုဂ္ဂလခေါင်းဆောင်၊ ဒါကြောင့် သူဆီက မျှော်လင့်ချက်တွေ လည်း အများကြီးရှိခဲ့ကြတယ်။ ၁၉၄၇၊ သြဂုတ်လ၊ ၁၄ ရက်၊ အိန္ဒိယ လွတ် လပ်ရေးနေ့မှာ တော်တော်ကောင်းတဲ့မိန့်ခွန်း အင်္ဂလိပ်လိုပြောခဲ့တယ်။ မိန့်ခွန်းအဖွင့်က “သန်းခေါင်ယံအချိန်မှာ ကမ္ဘာက အိပ်မောကျနေစဉ် အိန္ဒိယက ဘဝနဲ့ လွတ်လပ်ရေးအတွက် နိုးထနေမယ်” တဲ့။
ဒါပေမဲ့ အိန္ဒိယလူဦးရေရဲ့ ခြောက်ပုံတစ်ပုံကပဲ သူ့စကားကို နားလည်တယ်။ သူ့ ကက်ရှပီးယားလေသံဝဲတဲ့ ဟိန္ဒီကလည်း ပြေပြေပြစ်ပြစ်မရှိလှဘူး။ ဒီအတွက် သူနောင်တရတဲ့အကြောင်း ပြောဖူးတယ်။ သူက ဟာရိုး (Harrow) နဲ့ ကိန်းဘရေ့ခ်ျမှာ ပညာသင် ဘွဲ့ရခဲ့သူ။
မေး။ ။ သူ့စကားကို လုံးဝနားမလည်တဲ့လူတွေကြားမှာတောင် နေရူးဟာ နတ်ဘုရားတစ်ပိုင်းလို ကိုးကွယ်ခံနေရတာပဲ။
ဖြေ။ ။ မဟုတ်ဘူး။ ဒါက ဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ အတိတ်ကို ပြန်လည်တမ်း တခြင်း သဘောလောက်ပဲ။ အသက်အရွယ်ရလာလေလေ ငါတော့ စိတ် မကောင်းဖြစ်ရလေလေပဲ။ တကယ်လို့ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့နေရူး အသက် ရှင်လျက်ရှိနေမယ်ဆိုရင်တောင် အိန္ဒိယ လူထုအဖွဲ့အစည်းကို သူပြောင်း လဲပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ငါ ငယ်စဉ်တုန်းကတော့ သူ ဒီထက် ပိုလုပ်ပေး ခဲ့သင့်တယ်လို့ စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်ခဲ့မိသေးတယ်။ အခုမှ ငါသဘောပေါက်လာ တာက အထူးသဖြင့် ဇာတ်ခွဲခြားမှု တစ်ယူသန်အစွဲကို ဘယ်နည်းနဲ့မှ သူ ချွတ်ပေးလို့ မရနိုင်ဘူးဆိုတာပဲ။
မေး။ ။ အင်ဒီရာ ဂန္ဓီကတော့ စိတ်ဓာတ်တော်တော်မာတဲ့ အမျိုးသမီးပဲလို့ တစ်ခါက မစ္စတာလီ မှတ်ချက်ပေးဖူးသလားလို့။
ဖြေ။ ။ ဟုတ်တယ်။ သူက စိတ်ဓာတ်တော်တော်မာတဲ့ အမျိုးသမီးကြီး။
မေး။ ။ သူ အိန္ဒိယကို အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့စနစ်က အာဏာရှင်ဆန်သလားလို့။ အဲသလိုခေါင်းဆောင်မှု အိန္ဒိယက လိုနေတယ်လို့များ သူမက ထင်မြင်ခဲ့ လို့လား။
ဖြေ။ ။ ဟုတ်မယ်။ အိန္ဒိယဟာ အားကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင် လိုတယ်လို့ ငါထင်တယ်။ နိုင်ငံရဲ့ သဘာဝကကို ကိုယ်ထင်ရာ ကိုယ်စိုင်းနေကြတာ။
မေး။ ။ သူတို့ မှာ အားသာချက် မရှိတော့ဘူးလား။
ဖြေ။ ။ သူတို့ အားသာချက်ဆိုတာကပဲ သူတို့အားနည်းချက်ဖြစ်နေတယ်။ သူတို့က အရောင်အသွေးစုံတယ်။ မတူညီဘူး။ မြေငလျင်လှုပ်မှုဖြစ်ပြီ ဆို ပါတော့၊ ကျောက်ခဲ၊ မြေခဲတွေက နေရာရွေ့သွားပေမဲ့ သူ့အစုလေးနဲ့သူ ရှိနေတယ်။ တရုတ်ငလျင်ကတော့ ကျောက်ခဲ၊ မြေခဲတွေ ဖွာကြဲသွားတယ် လို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အိန္ဒိယရဲ့ အနေအထားကျတော့ သူ့ပြည်နယ်နဲ့ သူ့ အစိုးရနဲ့သူပဲ။ သူတို့ကို ပြောင်းရွှေ့လိုက်ပေမဲ့ ပုံစံတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ အစု
မေး။ ။အိန္ဒိယ လူဦးရေရဲ့ အသက်ပျမ်းမျှကွာဟမှု အကြောင်းကရော ဘယ်လိုလဲ၊ သူတို့မှာ အသက်(၁၅)နှစ်နဲ့ (၃၅)နှစ်အကြား လူငယ်တွေ အများကြီးရှိနေတယ်။ ဒါက စီးပွားရေးအတွက် အားသာချက် မဟုတ်ဘူး လား။
ဖြေ။ ။ လူငယ်ထုရဲ့ မောင်းနှင်အားတော့ ရှိမှာပေါ့။ သူတို့ ကလေးမွေး ဖွားနှုန်းက ၂.၅ ရှိတယ်။ တရုတ်ထက် ပိုများတာပေါ့။ တရုတ်လည်း ကလေး တစ်ယောက်ပေါ်လစီနဲ့ပတ်သတ်လို့ တချိန်ချိန်မှာ နောင်တရစရာတော့ ရှိ တယ်။ ဒါပေမဲ့ အိန္ဒိယရဲ့ ပြဿနာက အိမ်၊ ပညာရေး၊ စာသင်ကျောင်းနဲ့ လူနေမှုအဆင့်အတန်းပဲ။ တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင် ကျောင်းမရှိလို့ ဆရာေ တွက သစ်ပင်အောက်မှာ စာသင်ပေးကြရတယ်။ ဒီတော့ လူဦးရေများနေရင် လည်း ပညာမတတ်တဲ့လူတွေတိုးတာတာပဲ အဖတ်တင်မှာပေါ့။
မေး။ ။ တရုတ်ကိုတော့ အမေရိကားနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီး စီးပွားရေးတောင့်တင်း၊ အာရှမှာ လွှမ်းမိုးမှုရှိလာနိုင်မယ်လို့ ကြိုတင်နိမိတ်ဖတ်ခဲ့တယ်။ ဒါဆိုရင် အိန္ဒိ ယကရော ဘယ်လိုအခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်လာနိုင်မလဲ။
ဖြေ။ ။ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာတော့ သူတို့အားကောင်းနေလိမ့်မယ်။ သူတို့က တစ်သီးတစ်ခြားစီပေမဲ့ ဗြိတိသျှလက်ထက်က ရှိခဲ့တဲ့ ကြည်းတပ် နဲ့ရေတပ်အဆင့်အတန်းကို သူတို့ ထိန်းထားနိုင်တယ်။ ဒေလီမှာရှိတုန်းက သူတို့ရဲ့ Republic Day အခမ်းအနားကို ငါတက်ခဲ့ရဖူးတယ်။ ၁၉၉၆ ခု အိန္ဒိ ယခရီးစဉ်ကို သွားတုန်းကပေါ့။ သူတို့ စစ်ရေးပြအခမ်းအနားက တော်တော် အထင်ကြီးစရာကောင်းတာပဲ။ ခေါင်းပေါင်းတွေနဲ့ ပန်ဂျာဗီ(ပန်ချာပီ)ကြီးေ တွရော၊ အခြားတိုင်းရင်းသားစစ်သားတွေရောပဲ။ လူမျိုးတွေ ကွဲပြားနေပေ မဲ့ လေတပ်ကလည်း အားကောင်းတယ်။ အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာထဲမှာတော့ သူတို့ ကို အလွယ်တကူအနိုင်ယူလို့မရဘူး။
မေး။ ။ အိန္ဒိယ လူ့အဖွဲ့အစည်းက မစည်းလုံးဘူးဆိုရင် သူတို့ (စစ်တပ်ထဲ မှာ) ကရော ဘာဖြစ်လို့ စည်းစည်းလုံးလုံးရှိနေရတာလဲ။
ဖြေ။ ။ စစ်တပ်မှာ ယူနီဖောင်းရှိတယ်လေ။ မင်းစစ်တပ်ထဲဝင်ရင် စစ်တပ် အမိန့်ကို နာခံရမှာပဲ။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံရေးလောကမှာတော့ ပြည်နယ် အရာရှိ က ဒေလီကအမိန့်ကို နာခံချင်မှ နာခံတာ။ နောက်ပြီး နိုင်ငံရဲ့ လုံခြုံရေးဟာ အရေးကြီးဆုံးလို့ သူတို့ ယုံကြည်ကြတယ်။ ဒီတော့ ဒေလီကနေ မိုင်ထောင် ချီဝေးတဲ့ အက်ဒမန်ကျွန်းအပါအဝင် ကာကွယ်ရေးအတွက် ပိုပြီးတော့လည်း အားစိုက်ကြတယ်။
မေး။ ။ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာရော သူတို့ပါဝါ ဝင်ရောက်လာနိုင်မလား။
ဖြေ။ ။ အိန္ဒိယရေတပ်က ပစိဖိတ်ထဲ ဝင်လာမယ်လို့ ငါတော့ မထင်မိပါ ဘူး။ ငါထင်တာကတော့ တရုတ်ပဲ။ တရုတ်ဟာ မြန်မာနဲ့ ပါကစ္စတန်မှာ ဆိပ် ကမ်းကြီးတွေ တည်ဆောက်လာလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ ဒီဆိပ်ကမ်းတွေက အာဖရိက ကနေ ကုန်တင်ဝင်လာမယ့် သူတို့သင်္ဘောတွေ လုံခြုံရေး အတွက် ပဲ။ ဒါပေမဲ့ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲသွားပြီး တရုတ်က ဗိုလ်ကျချင်လို့တော့ မရဘူး။
in ပေါ့ပေါ့ပါးပါး - on 2/24/2014 - No comments
in The Clash of Civilizations, ဇင်ဝေသော် - on 2/24/2014 - No comments
အာစီယံက ထိရောက်မှုရှိတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံ စံပြအဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ဖြစ်၊ အဲသလိုအဖွဲ့မှာ အကန့်အသတ်တွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာရဲ့ သာဓကတစ်ခုလည်းဖြစ်။
စစ်ရေးအရ မဟာမိတ်ဖွဲ့တာလည်းမဟုတ်၊ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေက စစ်ရေးအရ အခြေခံ နှစ်ဦးသဘောတူညီမှုတွေရအောင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေချိန် စစ် အသုံးစာရိတ်တွေ တိုးမြှင့်၊ စစ်အင်အားတွေ စုစည်း။ အနောက်ဥရောပ နဲ့ လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတွေက လျှော့ချဖို့လုပ်နေတာတွေနဲ့ စာကြည့်ရင် မျက်လုံးပြူးသွားလောက်အောင် ဆန့်ကျင်နေတယ်။
ASEAN is often cited as an example of an effective multicultural organization. It is, however, an example of the limits of such organizations. It is notamilitary alliance. While its members at times cooperate militarily onabilateral basis, they are also all expending their military budgets and engaged in military buildups, in striking contrast to the reductions West European and Latin American countries are making.
(The Clash of Civilizations. p. 132)
Cultural questions like these involveayes or no, zero-sum choice.
in The Clash of Civilizations, ဇင်ဝေသော် - on 2/23/2014 - No comments
(The Clash of Civilizations. p. 130)
အိန္ဒိယပြည်ထဲက အယုဒ္ဓယမှာ ဟိန္ဒူဘုရားရှိခိုးကျောင်းပဲဆောက်သင့် သ လား၊ မွတ်စလင်ဗလီပဲဆောက်သင့်သလား။ နှစ်မျိုးလုံး ဆောက်သင့်သလား။ တစ်မျိုးမှ မဆောက်သင့်ဘူးလား။ နှစ်မျိုးလုံးသုံး၊ ဘုံဆိုင်အဆောက် အဦ ဆောက်သင့်သလား ဆိုတဲ့ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ သဘောတူညီမှု ရစရာမရှိဘူး။
အယ်(လ်) ဘေးနီးယန်း မွတ်စလင်တွေနဲ့ ဆာ့ပ်(ဗ်)အော်သိုဒေါက် (စ်)တွေ ကြားက ကိုဆိုဗိုနယ်မြေ အငြင်းပွားမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း တိကျတဲ့ အဖြေရလာစရာ မရှိဘူး။
နှစ်ဖက်စလုံးမှာ ခိုင်မာတဲ့ သမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ခံစားချက်တွေရှိနေတော့ အစ္စရေးတွေနဲ့ အာရပ်တွေကြားက ဂျေရုစလင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာက လည်း အလွယ်တကူ ရှင်းမရနိုင်ဘူး။
အလားတူပါပဲ၊ ပြင်သစ်အစိုးရနဲ့ မွတ်စလင်ကလေးမိဘတွေကြားက ကျောင်း သူတစ်ယောက်ရဲ့ ကျောင်းဝတ်စုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး အပေးအယူလုပ်ဖို့ ရလမ်း မမြင်မိဘူး။ အခြား ကွဲလွဲမှုတွေက အပေးအယူလုပ်လို့ရတယ်။ ယဉ်ကျေးမှု ကွဲလွဲမှုတွေက အပေးအယူလုပ်လို့ မရဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ယဉ်ကျေးမှု နဲ့ ပတ် သက်တဲ့ မေးခွန်းရဲ့ အဖြေက yes (သို့) no ပဲ ရှိတယ်။ ဇီရိုး ချွိုက်စ်၊ ရွေးစရာ မရှိ။
(ယဉ်ကျေးမှု ပဋိပက္ခ။ နှာ ၁၃၀)
(ဒါတွေကို (မသိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မူးလို့ပဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ ပညာရှိဖြစ်သွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လစ်ဘရယ် ဖြစ်သွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်) ရယ်သွမ်းသွေးမိရင်(သုိ့) ဘာသာပြန် တစ်ပိုဒ်စ နှစ်ပိုဒ်စလောက်ဖတ်ပြီး လူတတ်ဝင်လုပ်မိရင် နောင်တ ရလာ စရာရှိတယ်)
in The Clash of Civilizations - on 2/23/2014 - No comments
Once I had lunch with Samuel Huntington at the Harvard Faculty Club. I was eager to talk to him because he had used my 1991 book, “La Revanche de Dieu” (“The Revenge of God”), in his famous article and subsequent volume, “The Clash of Civilizations.”
I had argued that the emergence of religious political movements from the 1970s onward had comparable roots in Islam, Judaism and Christendom: They were all born ofareaction to the passing of the industrial age and had to do withaglobal rewriting of political identities that shifted from social to religious parlance.
Paradoxically, Huntington had focused only on the chapter that dealt with the Islamic world, and made use of it to help develop his idea about the exceptional character of the Muslim civilization; he had no interest in the study of the opposing forces that fought for hegemony over that new political discourse and competed with secular groups to control the central values of society. To him, Islam was homogenous — and “other.” We hadagood talk, though our views remained quite dissimilar.
A few years later came 9/11. Huntington was elevated toasecond media apotheosis: Al Qaeda terrorism proved him right, many believed, as it demonstrated on the ground that Islam had an absolutist dimension, and that the mass of the faithful could become Osama bin Laden’s followers.
In the meanwhile, I had written another book, “Jihad,” whose subtitle in the original French was “Expansion and Decline of Islamism.” The English-language translation, published in early 2002, skipped that part. I contended that Islamism, asacohesive ideology, was doomed to decline, because it boreafault line between two irreconcilable trends.
On the one side were the radicals, who would use more and more demonstrative violence to underline the weakness of the powers-that-be in an attempt to mobilize the masses on their side, and who would finally find themselves isolated and ostracized by those same masses, as the failure of Egyptian and Algerian radicals had proven in the 1990s.
On the other side,agrowing amount of Islamists were converting to the creed of pluralism and democracy, as was already then the case in Turkey. That change would not take place without turmoil within their ranks, but at the end of the day their ideological purity — based on the “absolute sovereignty of Allah” concept — would be corroded by parliamentary participation. Hence the movement would lose its unity and integrity.
After 9/11 those views were not the most popular; some in the French press suggested I be fired from my university chair. To them, the theory ofadecline of Islamism was laughable, while Samuel Huntington becameaprophet of sorts.
A decade later, many are surfing on the wave (and the Web) of Arab democratic revolutions. The same people who had extolled Huntington now make an auto-da-fé of his book, saying he misled us in pointing at Arabs and Muslims as radically “other”; now we know them to be just like us — they tweet, they’re on Facebook, and the figurehead of the Egyptian revolution is Google’s Middle East manager.
Things may actually be slightly less simple — and they should be put in perspective in the frame of the modern history of Islamism and its decline. Jihadi radicalism failed to mobilize the Muslim masses. Conversely, the authoritarian regimes of the Ben Alis and the Mubaraks, whose life expectancy had been extended by their Western allies foradecade because they bragged they were the bulwark against jihadism, became irrelevant.
Today, Arab civil society has dispelled its curse: It has moved on from “Either Ben Ali or Bin Laden” to “Neither Bin Laden nor Ben Ali.” The Arab revolutions have reached Phase One in Tunisia and Egypt — toppling the dictators — but they face the same ordeal: The parlance of democracy and human rights in which they coined political mobilization now has to deal with pressing social issues and address huge cohorts of jobless young urban poor.
Lacking it, the secularized middle classes that took the lead in Tunis and Cairo will be at risk. Islamists keptalow profile — even in Egypt, where the Muslim Brotherhood has the biggest and best organized network of charities, mosques and local associations. They couldn’t beat the democrats, so they joined them.
The Islamists, for the time being, are divided along generational and ideological lines, but they have not vanished from the Arab street — let alone from Tahrir Square, where Sheik Yusuf al-Qaradawi, back from Qatar, addressed the crowd for the Friday prayer. They find themselves, along with the whole of society, atadefining moment. It has little to do with the grand schemes of the clash of civilizations, and far more with grass-roots issues. All Arab politics are local — and Western academe could pay slightly more attention to that field than to the World Wide Web.
Gilles Kepel is professor of Middle Eastern politics at the Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po) andasenior fellow of the Institut Universitaire de France.
A version of this op-ed appeared in print on March 12, 2011, in The International Herald Tribune.
မော်ရင်ညိုရဲ့ ဆက်ဆံရေး (စနေဘောလုံး)
in ဇင်ဝေသော်, ဘောလုံး - on 2/22/2014 - No comments
"ကျနော်နဲ့ ရာဖာ ဘင်နီတက်ဇ်(လီဗာပူး နည်းပြဟောင်း) ကြား ဆက်ဆံရေး က ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာ မရှိခဲ့ဖူးပါဘူး။ အဲ..ချဲလ်ဆီးက လီဗာပူးကို ကန် လိုက်တိုင်း ရှုံးနေတုန်းကပေါ့ ဗျာ။
အခု ချယ်လ်ဆီးက လီဗာပူးကို နိုင်လိုက်တော့မှ ပြဿနာတက်လာတာ ဗျ၊ တောင်ပြောမြောက်ပြောတွေ ဖြစ်လာတာ"
(ပထမအကြိမ် ချယ်လ်ဆီးကို ကိုင်စဉ်က မောင်တင်ညိုရဲ့ စကားပါ၊ ပြုံးရ လို့ ပြန်တင်လိုက်တာ)
in The Clash of Civilizations, ဇင်ဝေသော် - on 2/22/2014 - No comments
လူဦးရေပိုများရင် အရင်းအမြစ်ပိုလိုတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လူဦးရေထူထပ်တဲ့ ( နောက်ပြီး/သို့မဟုတ်) ရုတ်တရက်ကြီးလူဦးရေတိုးပွားလာတဲ့ လူ့အဖွဲ့ အ စည်းတွေထဲကလူတွေဟာ အပြင်ကိုတိုးထွက်လာတတ်တယ်၊ နယ်မြေတွေ လုလာတတ်တယ်၊ လူဦးရေအားဖြင့် သူတို့လောက် အားမကောင်းတဲ့ လူတွေအပေါ် ဖိအားတွေ တိုးပေးတတ်တယ်။
Larger populations need more resources, and hence people from societies with dense and/or rapidly growing populations tend to push outward, occupy territory, and exert pressure on other less
demographically dynamic peoples.
(The Clash of Civilizations. p. 119)
(မတတ်နိုင်ဘူး၊ ၁၉၉၆ မတိုင်ခင်က ဟန်တင်တန်ရဲ့ အနာဂတ်ဟောစာ တန်းတွေပဲ)
in The Clash of Civilizations, ဇင်ဝေသော် - on 2/21/2014 - No comments
(၁) အတိုက်အခံပါတီထဲဝင် (၂) အတိုက်အခံပါတီ ကို သူတို့ လွှမ်းမိုးလာအောင်လုပ် (၃) နောက် အစိုးရကို ဖိအားပေး။ (၄) စသည်... စသည်..
ဒါပေမဲ့ ဒါတွေဖြစ်လာဖို့ လက်ရှိအစိုးရရဲ့ ပေါ်လစီက အခရာကျတယ်။
The success of Islamist movements in dominating the opposition and establishing themselves as the only viable alternative to incumbent regimes was also greatly helped by the policies of those regimes.
(The Clash of Civilizations. p 114)
အဖိုးသိမသွားတဲ့ ရေမျက်နှာပြင် ပြဿနာ (ပြန်တင်)
in ဝတ္ထုတို, သီဟနာဒ - on 2/21/2014 - No comments
ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးမှုကြောင့် ပင်လယ်ရေမျက်နှာ မြင့်တက်လာရသည် ဟုဆို သည့် ကျောင်းဆရာလေး စကားကို အဖိုးက လက်မခံပါ။
" မဟုတ်မဟပ်တွေ မပြောစမ်းပါနဲ့ ၊ နေပူလို့ ရေခန်းတာပဲ ရှိတယ်။ ဘယ်ကလာ ရေတက်ရမှာတုန်း၊ မယုံရင် ငါ့လယ်ကို ကြည့် " ဟု အဖိုးက ကျောင်း ဆရာလေးကို ငေါက်သည်။
ဝင်ရိုးစွန်း ရေခဲတောင်တွေ အရည်ပျော်ခြင်းထက် တဖြည်းဖြည်း ခန်းခြောက် လာနေတဲ့ သူ့ လယ်ကွက်ကိုပဲ နားလည်တဲ့ အဖိုးဟာ သူ့ဒဿန နဲ့ သူပဲ မှန်နေရရှာသည်။
သို့သော် ဤဒဿန မျှဖြင့်ပင် သူ့ဝန်းကျင်၊ သူ့ဘဝ အ တွက်တော့ ပြည့် စုံနေပါပြီ။ အဖိုးက လယ်သမားသာဖြစ်သည်။ သူ့ လယ် ထဲ ရေရှိလျှင် သူ့ စပါးအောင်မည်။
သီတင်းကျွတ်နေပူကို သူမုန်းသည်။ ရေခဲတောင်တွေကို အရည်ပျော်စေ ခြင်းကြောင့် ကား မဟုတ်။ လယ်ထဲကရေကို ခမ်းစေသောကြောင့် ဖြစ် သည်။
ထိုစဉ် စံလှထွန်း ဆိုသည့် တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခဟောင်းက
" အဖိုးပြောတာမှန်တယ်၊ ဟိုကောင် မသိလို့ လျှောက်ပြောတာ " ဟု ထောက်ခံပေးလိုက်သည်။
ကျောင်းဆရာလေးလည်း ဦးစံလှထွန်းကပါ ထောက်ခံနေသဖြင့် သူပြောချင် ရှင်းပြချင်နေသည့် ဂလိုဘယ် ဝမ်းမင်း ကိစ္စ ပြောမရတော့။
တကယ်တော့ စက်မှု တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခဟောင်း ဦးစံလှထွန်းကလည်း ဂလိုဘယ် ဝမ်းမင်း ကိစ္စလောက်တော့ သိပါသည်။
သို့သော် လယ် ရေမလုံလောက်မှာ စိုးရိမ်ပြီး ပူပင်နေရသော အသက် ၈၄ နှစ် ရှိ အဖိုးရှေ့မှာ မပြောသင့်လို့ မပြောဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်း သာ ဖြစ် ပါသည်။
သူ့ ဒဿနဲ့ သူပဲ ရှိပါစေ။
အကယ်၍ အဖိုးက ၁၈ နှစ်သား ဆိုသော် ဦးစံလှထွန်းက တစ်မျိုး ဖြေကောင်း ဖြေပါလိမ့်မည်။ ဦးစံလှထွန်းစကားဆိုလျင် အဖိုးကလည်း " စံလှထွန်း ပြောတာဆို ဟုတ်မှာ " ဟု ခံယူရှာပေမည်။ ထို့ကြောင့် အသက် ၈၆ နှစ်မှာ ကွယ်လွန်သွားရှာသော အဖိုးသည် ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးမှုကြောင့် ပင်လယ်ရေမျက်နှာ မြင့်တက်လာရသည် ဟုဆို သည့် သိပ္ပံ အမြင်ကို သိမသွားရရှာပါ။ သို့သော် အဖိုးဘဝမှာ ဒါ မသိလည်း လယ်ထဲ ရေရှိနေလျှင် ဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ချမ်းသာနေရှာသည်။ လယ်ထဲက ရေကသာ မြေးကို ရှင်ပြုပေးနိုင်သည် ဟု ယုံကြည်ထားသောကြောင့် ဖြစ်ဟန်တူပါသည်။
Labels: ဝတ္ထုတို, သီဟနာဒ
အိန္ဒိယ၊ ဇာတ်စနစ် သံကွန်ခြာထဲမှာ (နှစ်)
in ဇင်ဝေသော်, လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင် (လီကွမ်ယု) - on 2/20/2014 - No comments
"ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ပြဿနာအားလုံးကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ လိုတရ မန္တာန် မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါ။ .....ရှည်လျားတဲ့ သမိုင်းနောက်ခံရှိတဲ့ လူ့ အဖွဲ့အ စည်းတွေမှာ ရှိပြီးသား အချက်တွေကို ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ မလွယ်ကူ လှဘူး" (လီကွမ်းယု)
ဇာတ်စနစ်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အတွေ့အကြုံကို ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွေကတည်းက ကျွန်တော် သတိထားမိခဲ့ပါတယ်။ အိန္ဒိယ ဗြဟ္မဏဇာတ်ဖြစ်တဲ့ A.Sankaran ဆိုတဲ့ ကိုယ်ရေးအရာရှိ ကျွန်တော်မှာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူ့ပုံပန်းသဏ္ဍန်ကို ကြည့် ပြီး ဆန်ကရန်ဟာ ဗြဟ္မဏဇာတ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့ အိန္ဒိယ ခရီးစဉ် တစ်ခုမှာ ဆန်ကရန်လည်း ကျွန်တော်နဲ့အတူ ပါလာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရအိမ်တော်ကို သွားတော့ (Raj Bhavan or Government House) သတိထားမိစရာတစ်ခုသွားတွေ့မိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရအိမ်တော်ကိုရောက်လို့ သူက တောက်တိုမယ်ရ အလုပ် သမားတွေကို စကားပြောတော့ သူတို့အားလုံးက တလေးတစားလိုက်နာကြ တယ်။ သူ့အမူအယာနဲ့ စကားပြောဟန်ကိုကြည့်ပြီး သူဟာ ဗြဟ္မဏ တစ်ေ ယာက်ဆိုတာ သူတို့ကသိကြသလို သူ့စကားကလည်း တကယ်ထိရောက် တယ်။ ဆန်ကရန်ကတော့ အခုဆုံးသွားရှာပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ဒီအတွေ့အကြုံ ကိုတော့ ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှ မေ့မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ဘာမှ မဆိုင်တဲ့ စင်္ကာပူမွေး ဗြဟ္မဏတစ်ယောက်က အိန္ဒိယက အလုပ်သမားတွေကို စ ကားပြောတော့ သူဇာတ်မြင့်တာကို ကြည့်ပြီး တလေးတစားဆက်ဆံပြကြ တယ်။
နောက်ထပ်အဖြစ်အပျက်ကတော့ သိပ်မကြာခင် နှစ်ပေါင်း (၂၀)လောက် တုန်းက။ အာဂရကနေ ဒေလီကို ကားနဲ့ခရီးသွားစဉ်တုန်းကပါ။ အာဂရ (Agra) မှာ ရာထူးအမြင့်ဆုံးအရာရှိတစ်ယောက်တစ်ယောက် ကျွန်တော် နဲ့အတူရှိနေလို့ ဇာတ်စနစ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး သူ့ကို တီးခေါက်ကြည့်မိပါတယ်။ “ဆိုပါတော့၊ ကျွန်တော်က ကျွန်တော်ဟာ ဗြဟ္မဏတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် လို့ဆိုရင် ခင်ဗျားအနေနဲ့ ယုံကြည်နိုင်ပါ့မလား” လို့ သူ့ကိုမေးတော့
သူက “ခင်ဗျားမှာ ဗြဟ္မဏတွေရှိရမယ့် အဆင့်အတန်း၊ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုနဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားရှိမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်က ယုံကြည်မှာပါ၊ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားက ကျွန်တော့်သမီးကို လက်ထပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ခရေစေ့တွင်းကျ စစ်ဆေး ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်” လို့ ပြန်ပြောတယ်။
“ဒေလီလို ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ မြို့တော်ကြီးမှာနေသူတစ်ယောက်ရဲ့ နောက်ေ ကြာင်းကို ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ကြည့်နိုင်ပါမလဲ” လို့ ကျွန်တော်ကမေးတော့
“ဒေလီက ဒီလောက်ကြီးရှုပ်ထွေးလီတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်နေ ရာရာမှာတော့ ခင်ဗျား နေကိုနေရပါလိမ့်မယ်၊ ဒါဆိုရင် နောက်ကြောင်းခံ လိုက်ကြည့်ဖို့လည်း မခက်တော့ပါဘူး” လို့ သူကပြန်ဖြေပါတယ်။
ဒါတွေ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာက လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်တွေကပါ။ ဒါပေမဲ့ ပြောင်းလဲ မှုထူးထူးခြားခြား မရှိလှပဲ ဒါတွေဟာ အရင်အတိုင်းပဲ ရှိနေဆဲပါ။ ပိုပြီး ခေတ် မှီတဲ့ မွန်ဘိုင်းလိုမြို့မှာတော့ ဇာတ်စနစ်က နည်းနည်းအားလျော့လာနေသလို ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးကို ခြုံကြည့်ရင်တော့ ဇာတ်စနစ်ကို လက်မခံ သူက တော်တော်နည်းပါးပါတယ်။ ဇာတ်စနစ်အောက်ကနေ လုံးဝ လွတ်မြောက်ပါပြီလို့ အိန္ဒိယကိုယ်တိုင်ကြွေးကြော်ဖို့ကတော့ ဆယ်စုနှစ် များ စွာ ဒါမှမဟုတ်ရာစုနှစ်များစွာအထိတောင် ကြာနေနိုင်ပါသေးတယ်။
ဒါတွေကြောင့် တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယတို့ကြားကွာဟမှုကလည်း ပိုပိုများလာစရာပဲ ရှိပါတယ်။ အိန္ဒိယရဲ့ တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေက (ဒေါ်လာ ၁၅၀၀) တရုတ် တစ်ဦး ချင်းဝင်ငွေက (ဒေါ်လာ ၅၄၀၀)ဆိုတော့ သုံးပုံတစ်ပုံတောင်မရှိပါဘူး။ အိန္ဒိယတိုးတက်မှုနှုန်းက တရုတ်တိုးတက်မှုနှုန်းရဲ့ ၆၀ (သို့) ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းေ လာက် ရှိနေပါတယ်။ သူတို့တရုတ်ကို မှီလာမယ်လို့လည်း ကျွန်တော် မထင် မိပါဘူး။ အားကောင်းတဲ့ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေကြောင့် အိန္ဒိယရဲ့ အစိတ် အပိုင်းအချို့ဟာ တိုးတက်မှု မြန်ကောင်းမြန်နိုင်ပါတယ်။ မွန်ဘိုင်းက အဓိ ကနေရာဖြစ်မယ်။ ကမ္ဘာ့အဆင့်ရှိ စီးပွားရေးပညာရှင် N-R Narayana Murthy လို ပုဂ္ဂိုလ်က ဦးဆောင်တဲ့ Infasys လို ကုမ္ပဏီတွေရှိနေတော့ ဘန်ဂလော (Bangalor) မြို့ဆိုရင်လည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုန်းမြန်ဆန်တဲ့ မြို့တော်ပါ။ ဒါပေမဲ့ Infosys ကုမ္ပဏီက လူပေါင်း ဘယ်လောက်အလုပ်ပေး ထားနိုင်မှာလဲ။ အဲသလို စွမ်းရည်မျိုး တစ်ပြည်လုံးမှာ ဖြန့်မထားနိုင်ဘူး။
အခွင့်အလမ်း သိပ်မရှိတာကြောင့်လည်း ဖြစ်မယ်။ နိုင်ငံရဲ့ ဗြူရိုကရေစီ စနစ်ကြောင့် လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းမပေးနိုင်လို့ စိတ်ပျက်တာကြောင့် လည်း ဖြစ်မယ် အရည်အချင်းတကယ်ရှိတဲ့ အိန္ဒိယန်းတွေဟာ နေရာ သစ်တွေ ဆီသွားရောက်နေထိုင်းပြီး အိန္ဒိယကို ပြန်မသွားကြတော့ဘူး။ ဒါကလည်း အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ကြားမှာ သိသာထင်ရှားလှတဲ့ ခြားနားချက်ကြီး တစ်ခုပါ။ တရုတ်တွေလည်းပဲ အမေရိကားကို အများကြီး သွားကြတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ တချို့ကပြန်လာပြီး တရုတ်ပြည်ထဲမှာ စီးပွားရေးလုပ်ကြတယ်။ အိန္ဒိ ယမှာ မရရှိနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေတရုတ်ပြည်ထဲမှာ ရှိနေတယ်။ တနည်းပြောရရင် အိန္ဒိယ ဦးနှောက်ယိုစီးမှုဒဏ်ခံနေရသလောက် တရုတ်က မခံရဘူး။ အိန္ဒိယကနေထွက်ခွာသွားတဲ့လူတွေဟာ ပထမတန်းစားတွေချည်း ပဲ။ သူတို့ကပဲ Pepsi Co တို့ Deutsche Bank တို့လို ကမ္ဘာ့ကော်ပိုရေးရှင်း ကြီးတွေကို လည်ပတ်နေတာပါ။
နောက်ပြီး သိသာထင်ရှားတဲ့ အိန္ဒိယရဲ့အားနည်းချက်က အခြေခံအဆောက် အဦး မလုံလောက်မှုပါ။ စီးပွားရေးလုပ်ရာမှာ အဓိကကျတဲ့ အခြေခံ အေ ဆာက်အဦး မပြည့်စုံတဲ့အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကြားမှာ သူတို့နာမည်က မကောင်းလှဘူး။ ဆိပ်ကမ်း၊ ရထားလမ်း၊ လေယာဉ်ကွင်း ကူးလူးဆက်ဆံေ ရး၊ နေချင်စဖွယ် မြို့ပြ စတာတွေမရှိဘူး။ တရုတ်ပြည်ထဲမှာ မြှုပ်နှံမှုတွေ လုပ်နေတဲ့ ဂျပန်စီးပွားရေးသမားတချို့ သူတို့လုပ်ငန်းတွေ ထပ်ခွဲနိုင်ဖို့ အိန္ဒိယထဲကို ဝင်သွားကြတယ်။ ဟိုလည်းရောက်ရော ညံ့ဖျင်းလွန်းတဲ့ အဆောက်အဦးတွေကို မြင်တွေ့ရပြီး အံ့သြစိတ်ပျက် ဖြစ်ကြရတယ်။ ပစ္စည်းတွေကို ပြည်တွင်းထဲ ဘယ်လိုသွင်းမလဲ။ ထုတ်လုပ်ပြီးသားကုန်တွေ ကို ဘယ်လိုပြန်ထုတ်ကြမလဲ။ တရုတ်ပြည်ရဲ့ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးဆိုရင် ၁၉၈၈ခုမှာ ကီလိုမီတာ တစ်ရာတောင်မပြည့်သေးဘူး။ ၂၀၁၀ လည်းရော က်ရော ကီလိုမီတာ (၇၄,၀၀၀) အထိရှိလာတယ်။ အမေရိကန်အဝေးပြေးလမ်းမကလွဲရင် ကမ္ဘာမှာ အရှည်ဆုံးလမ်းမကြီးပဲ။ သူတို့နဲ့ နှိုင်းစာကြည့်တော့ အိန္ဒိယက ကီလိုမီတာ (၇၀၀)ပဲ ရှိတယ်။
အိန္ဒိယအစိုးရက လာမယ့်ငါးနှစ်အတွင်း လိုအပ်တဲ့ အခြေခံ အဆောက် အဦးတွေအတွက် အမရိကန်ဒေါ်လာ ဝမ်းထရီလီယံ သုံးမယ်လို့ပြောနေ တယ်။ ဒါကို ဘယ်သူက တာဝန်ယူ တည်ဆောက်မှာလဲ။ အိန္ဒိယန်းတွေဆောက်လုပ်မှာဆိုရင် အချိန်တွေ အများကြီးပိုကြာမှာ သေချာတယ်။ လက်တွေ့ကျတဲ့နည်းကတော့ ကိုရီးယား၊ ဂျပန်၊ တရုတ်တွေကို ပေးပြီး အဆောက်ခိုင်းလိုက်ဖို့ပဲ။ ဒါဆိုရင် လေးငါးနှစ်အတွင်းမှာ ပြီးနိုင်မယ်။ အိန္ဒိယက ဒါမျိုးရော လုပ်ပါ့မလား။ ကျွန်တော့်အထင်ကတော့ သိပ်မသေ ချာလှပါဘူး။
အိန္ဒိယနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဒီလို သုံးသပ်နေရတာ တကယ်ဝမ်းနည်းစရာပါ။ စစချင်းမှာတော့ အိန္ဒိယက ဒီမိုကရေစီ၊ တရုတ်က တစ်ပါတီအာဏာရှင် စနစ်မို့ အိန္ဒိယကို အမှတ်တွေ ပိုပေးခဲ့မိပါတယ်။ အသက်အရွယ် ရလာ တာနဲ့အမျှ ကျွန်တော်သိလိုက်ရတာနှစ်ခုရှိပါတယ်။ တစ်ခုကတော့ ဒီမို ကရေစီဆိုတာ ပြဿနာအားလုံးကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ လိုတရ မန္တာန် မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါ၊ ဒီမိုကရေစီစနစ်သာကျင့်သုံးရင် တရုတ်ပြည်လည်း ဒီနေ့တရုတ်ပြည်အနေအထားမှာ မရှိနိုင်ပါဘူး။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ တချို့လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ အလုပ်ခွင်မှာ ပြင်ရခက်တဲ့ အခြေခံအချက်ေ တွရှိနေတယ်။ အထူးသဖြင့် ရှည်လျားတဲ့ သမိုင်းနောက်ခံရှိတဲ့ လူ့အဖွဲ့ အစည်းတွေမှာ အဲ့ဒီ ရှိပြီးသား အချက်တွေကို ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ မလွယ်ကူလှဘူးဆိုတာပါ။ အိန္ဒိယဆိုရင် သူတို့ပြည်တွင်းထဲမှာ ကို ပဲ ပြောင်းလဲလို့ မရနိုင်လောက်အောင် အမြစ်တွယ်နေတဲ့ ဇာတ်စနစ်ကြီး ရဲ့ လှောင်အိမ်ထဲမှာ အပိတ်ခံနေရပါတယ်။
in ပေါ့ပေါ့ပါးပါး - on 2/19/2014 - No comments
Teacher:Pho Pu, join these two sentences together. "I was cycling to school. I sawadead body."
Pho Pu: (thinking forawhile) I sawadead body cycling to school.
in ဇင်ဝေသော်, ဘာသာပြန်, နိုင်ငံရေး ဂျုတ် - on 2/19/2014 - No comments
"ဖေဖေ၊ နိုင်ငံရေးဆိုတာ ဘာလဲ ဟင်"
(က) ဖေဖေက ပိုက်ဆံရှာပေးနေရတာဆိုတော့ "အရင်းရှင် စီးပွားရေး သမားပေါ့၊"
(ခ) သား မေမေက စီမံခန့်ခွဲနေရတာဆိုတော့ "အစိုးရ"
(ဂ) ဟိုဖက်အိမ်ကတော့ ဖေဖေတို့နဲ့ သဘောထားချင်းမတူလို့ "အတိုက် အခံပါတီ"
(ဃ) အိမ်ဖော် မနီကတော့ တစ်အိမ်လုံးရဲ့အလုပ်တွေကို သူပဲ ဒိုင်ခံလုပ်နေ ရတော့" ပြည်သူလူထု"
(င) သားကတော့" ကျောင်းသား"
(စ) သားရဲ့ ညီလေးက ကျောင်းမတက်နိုင်သေးတော့ "အနာဂတ်" ပေါ့။
ညပိုင်းရောက်တော့ ကျောင်းသားနဲ့အတူတူအိပ်ရတဲ့ အနာဂတ်လေးက အပေါ့အပါးတွေ ဘောင်းဘီထဲ ပါချလိုက်ရော။ ဒါနဲ့ ကျောင်းသားက သူမေမေအခန်းကို အကူအညီတောင်းဖို့သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူမေမေ က ဟောက်သံတွေနဲ့ အိပ်ပျော်နေတယ်။ သူက အိမ်နီးချင်းဆီ ဆက်သွား တယ်၊ ဟိုက ဘာပြောသလဲမသိဘူး၊ သူပြန်လာခဲ့ရတယ်။ နောက် မနီအခန်း ကိုသွားပြန်တော့ မနီအခန်းထဲက ကုဋင်ပေါ်မှာ သူ့ဖေဖေကိုပါ တွေ့လိုက် ရတော့တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ သူ့အခန်းထဲပြန်လာပြီး နှာခေါင်းပိတ်၊ နား ပိတ်ပြီး အိပ်လိုက်တော့တယ်။
"ညက ဖေဖေပြောတဲ့ နိုင်ငံရေးကို သား သဘောပေါက်သလား"
"ဟုတ်ကဲ့၊ ပေါက်ပါတယ်ဖေဖေ၊ ညက
(က) "အနာဂတ်လေး"က အီးအီးပါတယ်၊" ကျောင်သား" က
(ခ) အကူအညီတောင်းမလို့ "အစိုးရ" ဆီသွားတော့ အစိုးရက အိပ်နေတာ သိုးလို့၊ ခေါ်လည်း မကြားဘူး၊ မကြားချင်ယောင်ဆောင်တာလည်း နေမှာ။ ဒါနဲ့ ကျောင်သားက
(ဂ) "အတိုက်အခံပါတီ" ဆီဆက်သွားတယ်။ အတိုက်အခံပါတီက
"ဒါကို ကျမတို့က လုပ်မပေးနိုင်ပါဘူး၊ ကျမတို့ လုပ်မပေးနိုင်တာကို လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ချက်အမှားတွေ ပြည်သူကို မပေးနိုင်ပါဘူး" တဲ့။ တကယ်က အနာဂတ်လေး အီးအီးပါတာလောက် ပါ ဖေဖေ ရာ။ နောက် ကျောင်သားက
(ဃ) " ပြည်သူလူထု" ဆီသွားတယ်။ ပြည်သူလူထုခမျာကလည်း "အရင်းရှင် စီးပွားရေးသမား" ရဲ့ အမြတ်ကြီးစားမှုကို မလူးသာမလွန့်သာ ခံနေရတော့ ကျောင်သားနဲ့အနာဂတ်လေးရဲ့ အခက်အခဲကို မော်လို့တောင် မကြည့်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
(င) နောက်ဆုံးတော့ ကျောင်သားလေးလည်း နံ၊ စော်၊ အနာဂတ်လေး လည်း အီးအီးတွေ ပေ၊ ပွ။
နိုင်ငံရေးဆိုတာ အဲဒါမဟုတ်လား ဖေဖေ"
Labels: ဇင်ဝေသော်, ဘာသာပြန်, နိုင်ငံရေး ဂျုတ်
FBI Vs Woman
in ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ - on 2/18/2014 - No comments
ကဲ..သဝန်တိုတဲ့အမျိုးသမီးကတောင် ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ရာမှာ FBI ထက် သာသတဲ့။
in The Clash of Civilizations, ဇင်ဝေသော် - on 2/18/2014 - No comments
အဆုံးအမချင်း လုံးဝနီးပါးတူနေပေမဲ့ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ လှုပ် ရှားမှု၊ စည်းရုံးရေးစွမ်းရည်၊ လူထုအမှန်လိုနေတဲ့ စိတ်သက်သာရာကို ပေး စွမ်းနိုင်မှုစတာတွေအပေါ်မူတည်ပြီး လူကြိုက်များ၊ မများကို နှိုင်းယှဉ်ပြသမှု တစ်ခုပါ။ ရင်းနှီး၊ နွေးထွေး၊ ရှေးရိုးမဆန်၊ ဆက်ဆံရလွယ်ကူ၊ နားထောင်ပေး တတ်တဲ့နား စတာတွေပါဝင်ပါတယ်။ အချုပ်က မျက်နှာကြောတင်းတင်းနဲ့ ဟိတ်ကြီးဟန်ကြီး မလုပ်ဘူးပေါ့။
In Brazil in the early 1990s, for instance, 20 percent of the population identified themselves as Protestant and 73 percent as Catholic, yet on Sundays 20 million people were in Protestant churches and about 12 million were in Catholic ones.
The Clash of Civilization. P 99
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 2/18/2014 - No comments
"ကျော့ကွင်းမှ နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လွတ်ပြီးသော သမင်"
(နည်းပညာကြောင့် ယခုခေတ်မှာ လွတ်လမ်းသိပ်မရှိတော့)
(ဂလိုဘယ်ခေတ်၌ ပြောင်းသင့်က ပြောင်းကြရပေမည်)
ဆိုတဲ့လောကနီတိအဆိုက အံမဝင်တော့သလို ပြည့်စုံမှုလည်း မရှိတော့ပါ။
"ကတမာယာ ပြုအပ်သောမာယာရှိကုန်၏"၊ (ဝါ) ဘေးကလူ ယုံရခက်၏။
ဤ "........." စကားများသည် လောကနီတိအဆိုများတည်း။
အိန္ဒိယ၊ ဇာတ်စနစ် သံကွန်ခြာထဲမှာ (တစ်)
in ဇင်ဝေသော်, လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင် (လီကွမ်ယု) - on 2/17/2014 - No comments
"တစ်နိုင်ငံက လုပ်ဆိုလုပ်ချလိုက်တယ်။ နောက်တစ်နိုင်ငံက စကားတွေပဲ စွတ်ပြောနေပြီး လုပ်တဲ့အဆင့်ကို ရောက်မလာနိုင်ဘူး။ တရုတ်တွေ ဆီ မှာ တွေ့မြင်ရတဲ့ စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အားမျိုး အိန္ဒိယမှာ မတွေ့ရဘူး" (လီကွမ်းယု)
တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယကြားမှာ တိုင်းတာစရာ တူညီမှုဘာမှ မရှိဘူးဆိုတဲ့ကောက် ချက် ဒီနှစ်တွေအတွင်းမှာ ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်ပြည်ဟာ မူလဘူတကျကျတိုးတက်လာခဲ့ပြီး လူမျိုးအနေနဲ့လည်း တစ်မျိုးတည်းဖြစ် လာပါတယ်။ တကယ်တော့ နိုင်ငံတစ်ခုကို ပြင်ပကမ္ဘာက ဖန်ဆင်းပေးလို့ မရပါဘူး။ တရုတ်ပြည်မှာ ဟန်လူမျိုးက (၉၀) ရာခိုင်နှုန်းရှိနေပြီး သူတို့ပြော တဲ့စကားကိုလည်း တစ်နိုင်ငံလုံးက နားလည်ကြတယ်။ အိန္ဒိယမှာ ဒေသသုံးဘာသာစကားပေါင်း (၄၀၀)ကျော်ရှိနေပြီး (အီကော်နော် မစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၁၂) ဗြိတိသျှအစိုးရလက်ထက် ရထားလမ်းတွေနဲ့ နယ်မြေတွေဆက်သွယ်မပေးခင်က သူ့လူစု၊ သူ့ဘုရင်နဲ့သူ ရှိနေခဲ့ကြပါတယ်။ အဲသလို ဘာသာစကားမတူကွဲပြားနေမှုကြောင့် ဒေလီမြို့တော်ကနေ ပြီး နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ (၄၀)ရာခိုင်နှုန်းထက်ကျော်တဲ့လူတွေကို စကားမပြောနို င်တော့ပါဘူး။ ဒေလီဟာ ဟင်ဒီစကား အများဆုံးပြောတဲ့မြို့ပါ။ ၂၀၁၁ ခု စစ် တန်းအရ အိန္ဒိယလူဦးရေရဲ့ (၄၁)ရာခိုင်နှုန်းဟာ ဟင်ဒီစကားပြောပြီး ဟိန္ဒူ မ ဟုတ်တဲ့ ပန်ချာပီတွေလည်း ဟင်ဒီစကားကို နားလည်နိုင်ကြပါတယ်။ အခြားဘာသာစကားတွေဖြစ်ကြတဲ့ တမီး(လ်)တို့၊ ပန်ဂျာဘီ(ပန်ချာပီ)စကား တို့ဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဆက်စပ်နေပါတယ် ဆိုတဲ့ သမိုင်းအထောက် အထား လုံးဝမရှိပါဘူး။ ဒီဘာသာစကားတစ်မျိုးမျိုးကို ပြောနေရင် နားမလည်သူတွေ အဖို့ ဂရိစကားကို ပြောနေသလိုပါပဲ။ အင်္ဂလိပ်စကားပြောမယ်ဆိုရင် လူဦးရေ ၁.၂ ဘီလီယံထဲက သန်း(၂၀၀)လောက်နားလည်မယ်။ ဟင်ဒီစကားပြောရင် သန်း(၅၀၀)လောက်က နားလည်မယ်။ တမီး(လ်)စကားပြောရင် သန်း(၆၀) ဝန်းကျင်လောက်ကပဲ နားလည်မယ်။ ဒီအချက်ဟာ ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာသူ တစ်ယောက်အတွက် အကြီးအကျယ် အဟန့်အတားကြီးတစ်ခုပါပဲ။ ဘယ်ဝန်ကြီးချုပ်မှလည်း ဒီဘာသာစကားတွေအားလုံး ပြောနိုင်ဖို့ မစွမ်းနိုင်ပါ ဘူး။
အိန္ဒိယဟာ ဘယ်တုံးကမှ လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းနိုင်ငံမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ လူမျိုး တစ် မျိုးတည်းဆိုတာက ဗြိတိသျှအစိုးရနဲ့ အိန္ဒိယအမျိုးသားရေးဝါဒီတွေရဲ့ စည်း ရုံးရေးစကားသက်သက်ပါ။ သူတို့ ဘယ်လောက်ပဲကြိုးစားခဲ့ကြပါစေ ဒီအယူ အဆက အမှန်တရားဆိုတာထက် စိတ်ဓာတ်ရေးရာ သဘောတရားလောက် ပဲ ရှိပါတယ်။
အိန္ဒိယနဲ့တရုတ် ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုကြီးနှစ်ခုကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်တော့ ဒါကလည်း ပန်းသီးနဲ့ လိမ္မော်သီးလိုပါပဲ။ တရုတ်ပိုင်ဆိုင်ရရှိခဲ့တာတွေကို အိန္ဒိယရော ပိုင်ဆိုင်ရရှိနိုင်မလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းဟာ ပန်းသီးကို လိမ္မော် သီးဖြစ်အောင် လုပ်လို့ရမလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းနဲ့အတူတူပါပဲ။ အိန္ဒိယနဲ့ တရုတ် တို့ အခြေခံ မတူညီတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေရဲ့ ရလာဒ်က တော်တော်ထင်သာမြင် သာရှိပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံက လုပ်ဆိုလုပ်ချလိုက်တယ်။ နောက်တစ်နိုင်ငံက စကားတွေပြောနေပြီး လုပ်တဲ့အဆင့်ကို ရောက်မလာနိုင်ဘူး။ တရုတ်တွေ ဆီမှာ တွေ့မြင်ရတဲ့ စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အားမျိုး အိန္ဒိယမှာ မတွေ့ရဘူး။
အိန္ဒိယနိုင်ငံရေးပေါ်လစီတွေထဲမှာလည်း အက်ကြောင်း တွေ့ရပြန်တယ်။ ဒေ လီမှာရှိတဲ့အရာရှိက အခြားပြည်နယ်ကအရာရှိကို ဘာလုပ်ဆိုတာမျိုး သွားပြောလို့မရဘူး။ ပြည်နယ်အရာရှိက ဒေလီကလူရဲ့ ထောက်ခံမဲအပေါ် ရပ်တည်နေတာမဟုတ်ဘူး။ သူအုပ်ချုပ်နေတဲ့ ဒေသတွင်းက လူတွေထောက်ခံရင် ဟိုလူမထောက်ခံလည်း သူက ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ တရုတ်ပြည်မှာ ဗဟိုကပေးတဲ့အမိန့်ကို မလိုက်နာဘူးဆိုရင် ဘေးဖယ်ခံရမှာပဲ။ တရုတ်ပြည်က ပြည်ထောင်စုတစ်စုတည်းအနေနဲ့ ခရီးဆက်နေချိန် အိန္ဒိယ ကတော့ မတူညီတဲ့ကွဲပြားမှုတွေကြောင့် တစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်းဖြစ်လာဖို့ လွယ်ကူလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူး။
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ပေါ်လစီကိုကြည့်ပြီး ပြောစရာရှိကောင်း ရှိနိုင်မယ်။ ဒါပေမဲ့ တရုတ်ပြည်က ဥပဒေဘောင်ထဲကနေ ပြတ်ပြတ်သား သားဆောင်ရွက်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုလည်း သတိရသင့်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခု၊ စက်တင်ဘာလသတင်းမှာ ပါလာခဲ့တယ်။ ရှန်ရှီပြည်နယ်က ဖိန်ကျင်းမေ (Feng Jianmei) ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးက အစိုးရခွင့်ပြုချက်မရပဲ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ထားလို့ဆိုပြီး (၇)လသားကိုယ်ဝန်ကို အစိုးရက ဖျက်ချခိုင်းခဲ့တယ်။ အဲဒီ အချက်က ဗဟိုဦးစီးမှုစနစ်ဟာ ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာ ပြသနေပါတယ်။ မင်း ဥပဒေကို ချိုးဖောက်တယ်။ ဒါဆို ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချ၊ အဲသလိုမျိုးပါ။ အိန္ဒိယက အဲသလိုဖိအားပေးဖို့ အသာထား၊ အဲသလို ဥပဒေမျိုးကို ထုတ်မှာမဟုတ်ပါ ဘူး။ အိန္ဒိယအရှုပ်တော်ပုံထဲက နောက်တစ်ချက်က ဇာတ်ခွဲခြားမှုစနစ်ပါပဲ။ အဲဒီအချက်ကလည်း နိုင်ငံရဲ့တိုးတက်မှုကို နှေးကွေးစေတဲ့ အဓိကအချက်ပါ။ သူတို့ဇာတ်စနစ်အရ ကိုယ်အောက်နိမ့်တဲ့ဇာတ်ရှိသူကို လက်ထပ်လိုက်ရင် ကိုယ်ပါ အလိုလိုဇာတ်နိမ့်ထဲပါသွားတယ်။ ဒီတော့ ဗြဟ္မဏက ဗြဟ္မာချင်း၊ ကုန်သည်က ကုန်သည်ချင်း၊ ဆင်းရဲသားက ဆင်းရဲသားချင်းပဲ လက်ထပ် ကြတော့တယ်။ ဟိန္ဒူဘုန်းကြီးဖြစ်နေတဲ့ ဗြဟ္မဏဇာတ်တွေဟာ ကမ္ဘာမှာ ဘယ်လူတန်းစားနဲ့မဆို ရင်ဘောင်တန်းနိုင်တဲ့ ဥာဏ်အရည်အသွေး ရှိ တယ်။ တော်တော်များများက ဘာသာစကားပေါင်းများစွာပြောနိုင်ကြတယ်။ ဒီတော့ ဒီဇာတ်စနစ်ကြီးက အိန္ဒိယကို ဘယ်လိုထိခိုက်လာသလဲ။
ကျွန်တော့်အကြံပြုချက်ဟာ ပေါ်ပြူလာမဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ ဒါဟာ လုံးဝအမှန် တရားဆိုတာတော့ ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားပါတယ်။ ဗြဟ္မဏလူတန်း စားတွေထဲမှာပဲ တဝဲဝဲလယ်နေတယ်။ တရုတ်ရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှုကို ကြည့်ရင် ထက်မြက်တဲ့အစိုးရအရာရှိ၊ ဘုရင့်အရာရှိတစ်ယောက်ဟာ မိန်း မတွေအများကြီးယူခွင့်ရှိပြီး သူ့မျိုးရိုးဗီဇတွေကလည်း အများကြီးပျံ့နှံ့သွား တယ်။ ဗြဟ္မဏတစ်ယောက်ကျတော့ သူရဲ့ဇာတ်တစ်ဆင့်ချမပေးဘဲ ဗြဟ္မဏမဟုတ်သူကို လက်ထပ်လို့ မရတော့ ဘူး။ ဇာတ်စနစ်သာမရှိရင် ဗြဟ္မဏတွေက သူတို့မျိုးရိုးဗီဇကို ပျံ့နှံ့စေပြီး၊ (၅၀) ရာခိုင်နှုန်း ဗြဟ္မာဏတွေ အများကြီးရှိလာနိုင်ပါတယ်။
ဆိုပါတော့၊ နိုင် ငံတစ်ခုမှာ ဥပဒေအသစ်တစ်ခုတိုးလာတယ်။ တက္ကသိုလ် ဘွဲ့ရတစ်ယောက်က တက္ကသိုလ်ဘွဲ့မရသူကို ကိုယ့်ရှိပြီးသား အဆင့်အတန်း မစွန့်လွတ်ပဲ လက်ထပ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုရင် အဲ့ဒီလူ့အဖွဲ့အစည်းဘယ်မှာ လမ်း ဆုံးသွားမလဲ။
in ဇင်ဝေသော်, အွန်လိုင်း ဂျုတ် - on 2/16/2014 - No comments
Labels: ဇင်ဝေသော်, အွန်လိုင်း ဂျုတ်
အဘိဓမ္မာသင်တန်း အမှတ်စဉ် ( ၄/၂၀၁၄ ) @ မင်္ဂလ၀ိဟာရကျောင်း
in ဘာသာရေးသတင်း - on 2/16/2014 - No comments
အဘိဓမ္မာတရားတော်မြတ်ကြီးအား အပတ်စဉ်အချိန်မှန်မှန် အခြေခံမှစတင်သင်ယူလေ့လာ လိုသူများအတွက် အဘိဓမ္မာသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၄/၂၀၁၄) ကို အောက်ပါအချိန်အတိုင်း စတင်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါ၍ စိတ်ပါ၀၀်စားသူ မည်သူမဆို အခမဲ့ တက်ရောက်သင်ယူနိုင်ကြ ပါကြောင်း အဘိဓမ္မာအသင်းကြီး(စင်္ကာပူ) မှ လှိုက်လှဲစွာ ဖိတ်ခေါ် အပ်ပါသည်။
စတင်ဖွင့်လှစ်မည့်နေ့ ။ ။ ၂၀၁၄ ခု မတ်လ (၁) ရက် စနေနေ့
အချိန် ။ ။ ညနေ ၀၇း၀၀ မှ ၀၈း၃၀ အထိ (စနေနေ့တိုင်း)
သင်ကြားပေးမည့်ဆရာတော် ။ ။ ဦးဉာဏ၀ရ (ပညာပါရမီ)
နေရာ ။ ။ မင်္ဂလဝိဟာရကျောင်းတိုက်၊ ဒုတိယထပ် (30 Jalan Eunos, Singapore 419495)
နတ်လမ်းညွှန် ။ ။ အနီးဆုံး MRT - Eunos MRT (Bus: 21, 60, 63, 93, 854)
၁။ Online Registration
၂။ abhidhammafoundation.sg@gmail.com သို့
အဘိဓမ္မာသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၄/၂၀၁၄) - စာရင်းပေး သွင်းခြင်း ခေါင်းစဉ်ဖြင့်
အမည် ၊ ဖုန်းနံပါတ် နှင့် အီးမေးလ်တို့ကို ပေးပို့နိုင်ကြပါသည်။
လူတိုင်းအတွက် အဘိဓမ္မာအသင်းကြီး ( စင်္ကာပူ)
in ဇင်ဝေသော်, အွန်လိုင်း ဂျုတ် - on 2/15/2014 - No comments
ငါးနှစ်သားကောင်လေးက သူ့သူငယ်ချင်းကောင်မလေးဆီ စာရေးနေတာ
"သား သူငယ်ချင်းကောင်မလေးဆီ ချစ်ကြောင်း၊ သတိရကြောင်း စာရေးနေ တာပါ"
"ဟင် သားက စာရေးတတ်လို့လား"
"မရေးတတ်တော့ရော အကြောင်းလားဖေဖေ၊ သူလည်း စာမှ မဖတ် တတ်သေးတာ။
မရေးတတ်၊ မဖတ်တတ်လည်း ဒါ အချစ်ကိုပြတာပဲ၊ ဒါတွေကို ဖေဖေ နားမလည်ပါဘူး"
အရှေ့နဲ့အနောက် မတူကြဘူး (၂)
in ဇင်ဝေသော်, မောနင်း ပို့စ် - on 2/15/2014 - No comments
ဘော့စ်က "ခုန်၊ ခုန် (Jump.jump)" လို့ ခိုင်းရင်
၁။ အနောက်တိုင်းသားက "Why?" လို့ပြောတယ်။
၂။ ဂျပန်နဲ့ တရုတ်က "How high?" လို့ သေချာအောင် ထပ်မေးတယ်။
၃။ အိန္ဒိယန်းနဲ့ မလေးကတော့ "အချိန်မရှိတော့ဘူး၊ နောက်နေ့မှ"တဲ့။
၄။ ထိုင်းက"တီရှပ်အနီနဲ့ကောင်ကို သွားခိုင်း"လို့ ဘောလီဘောကစားတယ်။
၅။ မြန်မာက "ဟုတ်ကဲ့ အဘ" တဲ့၊
ခဏနေတော့မှ"ဘာကွ၊ ဒါ ဒီမိုကရေစီခေတ် ကွ" တဲ့။
(၃၊ ၄၊ ၅ က ကျနော်ပွားထားတာပါ)
in ကဗျာ, ဇင်ဝေသော် - on 2/15/2014 - No comments
ငါ သွေးထားတဲ့ဓား မထုတ်နိုင်ခင်
သာမညဖလ (ရဟန်းဖြစ်ရခြင်း အကျိုး)
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 2/14/2014 - No comments
Artist Min Wae Aung
ယခုရေးလိုသည့်အကျိုးက သာမညဖလ(သုတ်)ထဲမှာ မပါဝင်ပါ။ ဒီဇင်ဘာလ တုန်း က ကျောင်းမှ အဖွဲ့နဲ့အတူ သီရိလင်္ကာကို သွားရောက်ခဲ့သည်။ တစ်ပြားမှ မ ကုန်ဘဲ ရောက်ခဲ့ရသည့် ခရီး ဖြစ်၏။ ထို့အပြင်၊ ထို့အပြင်သည် ယခုရေး လိုသော ကိစ္စ ဖြစ်ပေသည်။
စင်ကာပူကနေ ည (၁၀) နာရီမှာထွက်ရမည့် ကက်သီပစိဖိတ်လေကြောင်း က အကြောင်း တစ်ခုခုကြောင့် နောက်ကျနေ၏။ (၁၀) နာရီမှ (၁၁) နာ ရီ ရွှေ့၏။ (၁၂) နာရီမှာ (၁) နာရီ ရွှေ့ပြန်၏။ (၁) နာရီမှာ တဖန် နောက်နေ့ ညနေ (၇) နာရီရွှေ့ပြန်၏။ မတတ်နိုင်၊ ကျောင်းပြန်ခဲ့ရသည်။ ကျောင်းမှာ ရှိနေသည့် ရဟန်းက မကျိန်းသေးသဖြင့် အပေါက်ဖွင့်ပေးလို့သာ တော်သေး သည်။ သို့မဟုတ်လျှင် ဒုက္ခ အကြီးအကျယ် တွေ့ရမည်။ လေကြောင်းက စီ စဉ်ပေးသည့် ခရီးသည်များလည်း မနက် (၅) နာရီရောက်မှ ဟိုတယ်ရသည် ဟု ကြားရ၏။
ထိုသို့ ခရီးစဉ် နှောက်နှေးမှု့ကြောင်း ခရီးသည်များက လေကြောင်းလိုင်းထံမှ နစ်နာကြေး တောင်းကြ၏။
ထိုတောင်းထားသည့် နင့်နာကြေး မနေ့က ရောက်လာသည်။ ဆင်းဒေါ်လာ (၁၅၀) တန် ချက်လက်မှတ် ဖြစ်သည်။ ပြုံးမိ၏။ တစ်ပြားမှ မကုန်ခဲ့ရသော ခရီးစဉ်မှ ဒေါ်လာ (၁၅၀) အမြတ်ထွက်လို့ နေတော့၏။
ဤနဝကမ္မကိုတော့ဖြင့် မယူသင့်၊ ကျောင်းရံပုံငွေထဲ ပြန်လှူသင့်သည်ဟု ယူဆသဖြင့် အတွင်းရေးမှူး ဒကာမကို အကျိုးအကြောင်းပြောပြီး ပေး လိုက်သည်။ ဘဏ်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ အလုပ်လုပ်ခဲ့သော ယင်း ဒကာမက လည်း ဒီလို လုပ်လို့ မရကြောင်း သိပါလျှက် ဘာမှ မပြော။
“Yes, Bhante” ဟုသာ ပြောသည်။
ယင်းကိစ္စကို ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ သိတော့မှ ကိစ္စပြတ်သွားသည်။
“ဘန္တေ၊ ဒီလိုလုပ်လို့ မရဘူး။ ဘန္တေရဲ့ နာမည်နဲ့ ရောက်လာတဲ့ ချက်ကို ဘယ်အကောင့်ထဲမှ ထည့်လို့ မရဘူး။ ကိုယ့်အကောင့်ထဲကို အရင်ထည့်၊ ပြီးတော့မှ ပုံစံတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ ကျောင်းရံပုံငွေထဲ ပြန်လှူရင်တော့ ရမယ်”
ဟု သူက ဆိုလေသည်။
မှန်၏။ ချက်လက်မှတ်ထဲမှာ ပြောင်းလွှဲလို့ မရဟု ပါသည်။ ဒါကိုသိဖို့ အလွန် အမင်းဘရိုက်ဖြစ်နေစရာ မလို။ ကိုယ်တိုင်က ဒါကို သတိမမူမိခဲ့ခြင်း ဖြစ်၏။ ဤကိစ္စက ဤမှာ ပြီးသွားပြီ။ မပြီးသည်က အာရှယဉ်ကျေးမှု။ တရုတ်ရယ် ၊ မြန်မာရယ် တယ်ပြီး မထူးခြားလှ။ သူမကို ပေးလိုက်စဉ်ကတည်းက အတွင်းရေးမှူး ဒကာမက
“ဘန္တေ၊ ဒီလို လုပ်လို့ မရဘူး”
ဟု လျှောက်သင့်သည်။ သူမက မလျှောက်။ ဘုန်းကြီးတစ်ပါး ခိုင်းတာကို “No” မပြောချင် (သို့) အတွန့် မတက်ချင် (သို့) ဒီလိုလုပ်လို့ မရမှန်း သူကိုယ် တိုင် သိလာလိမ့်မည်ဟု ထင်ထားဟန် ရှိ၏။ ယခုစာကလည်း သူမကိုအပြစ် ဖွဲ့ခြင်း မဟုတ်၊ အာရှတိုက်သား ရဟန်းတစ်ပါးအတွက် ဒုတိယ အကျိုး သာ ဖြစ်၏။ (ပထမအကျိုးက ဆိုခဲ့ပြီ။ တစ်ပြားမှ မကုန်သော ခရီးမှ ဒေါ်လာ (၁၅၀) အဆစ်ရသည် - ဖြစ်၏။)
လူတော်တော်များများက ရဟန်းတစ်ပါး မှားနေလျှင်ပင် ထောက်ပြဖို့ ဝန်လေးတတ်ကြ၏။ မကောင်းလှ ထင်သည်။ ဤကိစ္စမျိုး၌ တရုတ်က မြန် မာထက်တော့ သာသည်ဟု ဆိုနိုင်သော်လည်း သိပ်တော့ မထူးခြားလှ။ ရဟန်း၏ အမှားကို ထောက်ပြရမှာကို ငရဲကြီးမှာ စိုးတာနဲ့ပဲ “မှားချင်သေ လာက် မှားပါစေ၊ ကြည့်နေလိုက်မယ်။ တချိန်ချိန် သဘောပေါက်လာ လိမ့်မယ်”
ဆိုသည့် သဘောမျိုး ရောက်သွား နိုင်ပြန်၏။ ဤစာဖြင့် အာရှယဉ်ကျေး မှု ကို ဝေဖန်နေခြင်းမျိုးလည်း မဟုတ်။ ရဟန်းမှားမှာ ထောက်ပြသူ နည်းလာ သဖြင့် တာဝန်ပိုကြီးလာသည်ဟု ဆိုလိုချင်ရုံမျှသာ ဖြစ်သည်။ (ရာထူး အရှိန် အဝါကြီးလေလေ၊ ထောက်ပြသူနည်းလေလေ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်၏)
အကယ်၍ ထိုရဟန်းက အမြင်မှန်၊ အသိမှန် မရခဲ့သော်???
ရသော်လည်း အချိန်တွေ အလွန်နောက်ကျမှ အသိ၊ သတိရခဲ့သော်???
မေးခွန်းများ ဝေ့ကာဝဲ့ကာ ထွက်လာလေတော့၏။
အပ္ပမာဒေါ အမတံ ပဒံ။
in စကားပြောသော, ဇင်ဝေသော် - on 2/14/2014 - No comments
ပုံရဲ့ မော်ရယ်က သူငယ်ချင်းဆိုတာ ဆွဲမတင်နိုင်ရင်သာနေမယ် အောက် ပြုတ်ကျမသွားအောင်တော့ အမြဲစဉ်းစားပေးတယ် တဲ့။
Labels: စကားပြောသော, ဇင်ဝေသော်
မတတ်နိုင်ဘူး၊ အီးမေးထဲရောက်လာတာက ဒါတွေ။
in ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ - on 2/13/2014 - No comments
တစ်ရက်မှာ ၂၄ နာရီ၊ တစ်ဖာမှာ ဘီယာ ၂၄လုံး၊ ဒါ တိုက်ဆိုင်မှုတဲ့လား။ ကျနော်တော့ မထင်။
အရက်သောက်ခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေဖတ်ရတယ်။ ဒါနဲ့ ဖြတ်ပစ်လိုက်တယ် စာဖတ်ခြင်းကို
in ဇင်ဝေသော်, လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင် (လီကွမ်ယု) - on 2/13/2014 - No comments
ကိုရီးယား အမေး၊ အဖြေ
"ဗမာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေက ဒီပုံအတိုင်းဆိုရင် ဘယ်မှရောက်မှာ မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာ သဘောပေါက်လို့ ပြောင်းသွားကြတာ။... မြန်မာ စစ်ဗိုလ်ချုပ် ကြီးတွေ လုံခြည်နဲ့ ခေါင်းပေါင်း ဝတ်ထားတာကို ကြည့်၊ ကိုရီးယားတွေလောက် ရက်စက် ခေါင်းမာပုံ မပေါက်ဘူး။ လူတွေချင်း မတူကြ ဘူး" (လီကွမ်းယု)
မေး ။ ။ အရှေ့မြောက်အာရှမှာ နျူးကလီးယားလက်နက် ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ ရှိလာနိုင်တယ်လို့ မြင်ပါသလား။
ဖြေ ။ ။ မြောက်ကိုရီးယားမှာ နျူးကလီးယားလက်နက် ရှိနေပြီတောင် ဖြစ်နိုင်တယ်။ တောင်ကိုရီးယားပဲ ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ရှိတော့တယ်။ သူတို့အနေနဲ့ စွမ်းနိုင်တယ်လို့လည်း ငါ ထင်တယ်။ အမေရိကန်က စီးပွားရေး ကျဆင်း သွားပြီး အာရှထဲမှာ ခွန်အားဖြည့်တင်းဖို့ မစွမ်းနိုင်တော့ဘူးဆိုရင် ဒါ ဖြစ် လာနိုင်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အမေရိကန်တွေ အာမခံထားတဲ့ တောင် ကိုရီး ယားနဲ့ ဂျပန်တို့ရဲ့ လုံခြုံရေးကိစ္စကလည်း မရှိနိုင်တော့ဘူး။
မေး ။ ။ ဒီလိုဆိုရင် နျူကလီးယားပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့အထဲမှာ ဂျပန်တွေလည်း ပါဝင်နေပြီပေါ့။
ဖြေ ။ ။ သူတို့ကတော့ ဟီရိုရှီးမားနဲ့ နာဂါဆာကီမှာ ခံထားရတော့ နျူး ကလီးယား ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာ နောက်ဆုံးက ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ အဲဒီမြို့တွေမှာ သေဆုံးသွားတဲ့ လူတွေကြောင့် သာမက ဗုံးရဲ့အကျိုး ဆက်ဖြစ် သွေးကင်ဆာ (leukemia) စတဲ့ ရောဂါတွေကြောင့် သေဆုံးရတဲ့ လူတွေကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ သူတို့ကတော့ နျူး က လီးယားကို စိတ်အနာကြီး နာနေကြမယ်။
မေး ။ ။ တကယ်လို့ ဂျပန်ရော တောင်ကိုရီးယားပါ အနုမြူလက်နက်တွေ ပိုင်ဆိုင်ထားကြပြီးဆိုရင် အရှေ့မြောက်အာရှဒေသတွင်းမှာ လုံခြုံ မသွားနိုင် ဘူးလား။ အားလုံးက အနုမြူတွေ ရှိနေတော့ တစ်နိုင်ငံနဲ့ တစ်နိုင်ငံ စစ်ဖြစ်ရဲ မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။
ဖြေ ။ ။ ဒါက အခြေအနေ အရပ်အရပ်အပေါ် မူတည်နေလိမ့်မယ်။ အနုမြူလက်နက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သီအိုရီတွေကလည်း အများသားလား။ မင်းက အနုမြူနဲ့ ရန်သူကို တစ်ချက်တည်း အပြီး လက်ဦးမှုယူပြီး တိုက် လိုက်နိုင်ရင် ရန်သူက ဘာမှ သိပ်တုန့်ပြန်နိုင်မှာ မဟုတ်တော့ဘူးလေ။ တစ်ချက်တည်း မပြတ်လိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ ရန်သူက ပြန်တိုက်လာမှာ။ ဒါဆိုရင်တော့ အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်ကြရင်းနဲ့ အတော် ကြောက်စ ရာ ကောင်းမယ်ဆိုတာ မြေကြီးလက်ခက် မလွဲပဲ။
မေး ။ ။ လာမယ့်နှစ် (၂၀) အတွင်း ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာတော့ စစ်ဖြစ်နိုင်ခြေ မရှိဘူးလို့ ထင်တယ် မဟုတ်လား။
ဖြေ ။ ။ မဖြစ်လောက်ဘူးလို့ ထင်တယ်။ ဘယ်သူ့ အကျိုးအမြတ်မှ မရှိဘူး။
မေး ။ ။ မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်း အနေနဲ့ လစ်ဗျားဆီကနေ သင်္ခန်းစာ ယူနိုင်သလို မြန်မာဆီကကော သင်္ခန်းစာ ယူနိုင်မယ် မဟုတ်ဘူး လား။ သူတို့ စစ်အာဏာရှင်လည်း နောက်ဆုံး စိတ်ပြောင်းခဲ့ကြတာပဲ။
ဖြေ ။ ။ ဗမာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေက ဒီပုံအတိုင်းဆိုရင် ဘယ်မှရောက်မှာ မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာ သဘောပေါက်လို့ ပြောင်းသွားကြတာ။ ထိုင်းနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတာကို သူတို့ တွေ့ရတယ်။ ဒီပုံစံနဲ့ ဆက်ပြီးခရီးဆက်လို့ မရနိုင်တော့ဘူး၊ နောက်ဆုံး ပြိုလဲကျသွားမှာဆိုတာကို သူတို့ သိသွားကြ တယ်။ ဒါပေမဲ့ မြောက်ကိုရီးယားတွေက ယဉ်ကျေးမှုအရရော ပုံသဏ္ဍာန် အရပါ မတူ ကွဲပြားနေကြတယ်။ မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ လုံခြည် နဲ့ ခေါင်းပေါင်း ဝတ်ထားတာကို ကြည့်၊ ကိုရီးယားတွေလောက် ရက် စက် ခေါင်းမာပုံ မပေါက်ဘူး။ လူတွေချင်း မတူကြဘူး။
မေး ။ ။ ကင်ဒေးဂျုံ (Kim Dae-Jung) ရဲ့ ဆန်းရှိုင်းပေါ်လစီ အချိန်ကနေ စပြီး တောင်ကိုရီးယားရဲ့ မြောက်ကိုရီးယားအပေါ် ကျင့်သုံးတဲ့ ပေါ်လစီက ရုတ်တရက်ကြီး ပြောင်းသွားခဲ့တယ်။ သမ္မတလီမြောင်ဘတ် (Lee Myung-bak) ဆိုရင် တော်တော် တင်းမာတဲ့ ပေါ်လစီကို ကျင့်သုံးခဲ့တာပဲ။ အဲဒါ ပညာသားပါတဲ့ ပေါ်လစီလား။
ဖြေ ။ ။ ကင်ဒေးဂျုံရဲ့ ပေါ်လစီကတော့ အလုပ် မဖြစ်ပါဘူး။ အလုပ် သာ ဖြစ်ခဲ့ရင် ဒီပေါ်လစီကို ဆက်ပြီး ကျင့်သုံးမှာပေါ့။ မြောက်ကိုရီးယားက ဒါကို အခွင့်ကောင်းယူနေတာ။ လီမြောင်ဘတ်ရဲ့ ပေါ်လစီက အဓိပ္ပါယ် ပိုရှိတယ်။ မင်းက အစာကျွေးလို့ ကျေးဇူးတင်ရကောင်းမှန်းမှ မသိ၊ လက်ကိုပါ ကိုက်နေမှတော့ ဘာလို့ ဆက်ကျွေးနေတော့မှာလဲ။
မေး ။ ။ တောင်ကိုရီးယားနဲ့ ပတ်သက်လို့ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်လောက်က မစ္စတာလီ မှတ်ချက်ပေးဖူးတယ်။ တောင်ကိုရီးယားဟာ မာရှယ်လော ဥပဒေအောက်ကနေ ရုတ်တရက်ကြီး လွတ်လပ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပုံစံ ကို ပြောင်းခဲ့တယ်။ အဲသလို ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲတဲ့ နိုင်ငံတိုင်း ပြဿ နာတွေ ကြုံတွေ့ရတယ် စသဖြင့်ပေါ့။ အခုလက်ရှိ တောင်ကိုရီးယားကို ကြည့်ပြီး သူတို့ပြောင်းလဲမှု အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ မထင်မိဘူးလား။
ဖြေ ။ ။ စစ်မက်လိုလားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ မပါဘဲ ဖြည်းဖြည်း ချင်း ပြောင်းလဲယူကြလိမ့်မယ်လို့ ငါက တွက်ထားတာ။ အဲဒီ အဖွဲ့အစည်းတွေ က အခုလည်း စစ်သွေးစစ်မာန် ရှိနေတုန်းပါပဲ။ သူတို့ လက်သီးလက်မောင်းေ တွ တန်းပြီး ဆန္ဒပြနေပုံတွေကို မင်းတို့ မြင်ဖူးမှာပဲ။ အဲဒါ သူတို့ယဉ်ကျေးမှုရဲ့ အစိတ်အပိုင်းပဲ။
မေး ။ ။ တချို့ကလည်း ဒါကို စွမ်းရည်ပြသတာလို့ ပြောကြပါတယ်။ သူတို့ ဘယ်လောက် စည်းကမ်းသေဝပ်သလဲဆိုတာ ပြတာမျိုးပေါ့။
ဖြေ ။ ။ ဂျပန်လူမျိုးတွေလည်း သန်မာတာပါပဲ။ သူတို့ အဖွဲ့အစည်းတွေ ဆန္ဒပြရင် လက်ပတ်လောက်ပဲ လက်မောင်းမှာ ပတ်ထားကြတာပါ။ ဂျပန်တွေက သူတို့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ ပြဿနာတွေထက် ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ နိုင်ငံကို ဦးစားပေး စဉ်းစားကြတယ်။ ဒီအချက်ကို ထောက်ဆကြည့်ရင် ကိုရီးယားနဲ့ ဂျပန် တူကိုမတူဘူး။
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 2/12/2014 - No comments
အပ္ပမာဒေါ အမတံ ပဒံ၊ ပမာဒေါ မစ္စုနော ပဒံ။
မမေ့ မသေ၊ မေ့လျှင် သေ။
ပထမ ဖလော်ဆော်ဖာ -
“ဘုရားရှင် မိန့်တော်မူ၏။ မမေ့လျော့ခြင်းသည် မသေချင်းတရား (နိဗ္ဗာန်) ၏ အကြောင်းဖြစ်သည်။ မေ့လျော့ခြင်းသည် (အဖန်ဖန်) သေရခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်၏။
“ထို့ကြောင့် မမေ့ကြနှင့်။ ဘာကို မမေ့ရမည်နည်း။ အသက်ရှူခြင်းတည်း။ အသက်ရှူဖို့မမေ့ကြလေနှင့်။ အသက်ရှူဖို့ မေ့လျှင်ဖြင့် သေလိမ့်မည်”
(တနင်္ဂနွေသား ဆရာတော်တစ်ပါး မိန့်ခဲ့သည်ဟု ပြောရန်လိုက ဤ၌ ပြောထားခဲ့ချင်၏။)
ဒုတိယ ဖလော်ဆော်ဖာ -
“လူဟူသည်အသက်ရှူဖို့မေ့သော သတ္တဝါမဟုတ်။ အသက်ရှူနေသည်ကိုသာ မေ့သောသတ္တဝါတည်း”
“အသက်ရှူမှုကို မေ့နေသော်လည်း အသက်ရှူမှုက ရပ်တန့်မသွား။ ဖောင်းမှု ပိန်မှုကို မေ့နေသော်လည်း ဖောင်းမှု ပိန်မှုက ရပ်တန့်၍မသွား။ ဖောင်းမြဲ ပိန်မြဲတည်း။ ဓာတ်ဆီဖြင့်မောင်းသောကား ဓာတ်ဆီကုန်လျှင် ရပ်တန့်သွားသကဲ့သို့ သတိမေ့ခြင်းကြောင့်တော့ အသက်ရှူမှုကမရပ်။ အကြောင်းက သတိသည် အသက်ရှုခြင်း၏ အကြောင်းတရား မဟုတ်သောကြောင့်တည်း။”
“သတိ (အမှတ်) ရသည်ဖြစ်စေ၊ မရသည်ဖြစ်စေ အသက်ရှူမှုက ရှိမြဲ။ မပူပင်ရ။ ထို့ကြောင့် လူသည် အသက်ရှူမှုအပေါ် မေ့မေ့လျော့လျော့ ရှိ၏။ သတိမေ့လိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် အသက်ရှူမှု ရပ်တန့်သွားမည်ဆိုလျှင် လူသည် အသက်ရှူမှုကို ဤထက်အလေးထားစရာ ရှိ၏”
နားကြားပြင်းကတ်သွားသောယောဂီသည် ထိုအသက်ရှူမှုကို ဆိတ်ငြိမ်ရာ၌ ထိုင်မှတ်နေတော့၏။
ထိုအခါ ထိုယောဂီသည် ဘုရားရှင်၏ မုခပတ်တော်မှ တိုက်ရိုက်ကြားနေရသကဲ့သို့ ဤဝါကျကို ရှင်းရှင်းကြီးကြားနေရသည်ဟု ဆို၏။
“အပ္ပမာဒေါ အမတံ ပဒံ၊ ပမာဒေါ မစ္စုနော ပဒံ။”
ထိုယောဂီအတွက် စကားလုံးများ၊ ဝါကျများ၊ ငြင်းခုံမှုများ မလိုတော့။ ဝင်မှု၊ ထွက်မှု (သို့) ဖောင်းမှု၊ ပိန်မှုသာ လိုတော့၏။ ထိုဖောင်းမှု ပိန်မှု မရှိလည်း မှုစရာမလို။ အခြားသော မှတ်သားစရာများ မျာစွာရှိ၏။ ဤသို့ဖြင့် သူသည် စကားလုံးများကို လွန်မြောက်သွားတော့၏။
(စကားလုံးများကို လွန်မြောက်သွားသော မိတ်ဆွေရဟန်းကို ဂုဏ်ပြုပါသည်။ မိမိကား ကြိုးစားဆဲ။ စကားလုံးများဖြင့် ရစ်ထွေးနေဆဲ။)
in The Clash of Civilizations, ဇင်ဝေသော် - on 2/12/2014 - No comments
ဂျာမန်နဲ့ ပြင်သစ်လူမျိုးနှစ်ယောက် သူတို့ချင်းတွေ့ဆုံရာမှာ တစ်ယောက်က ဂျာမန် နောက်တစ်ယောက်က ပြင်သစ်ဖြစ်နေပြီး သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ အီ ရတ်၊ အီဂျစ်လူမျိုးနှစ်ယောက်တွေ့ဆုံရာမှာတော့ ရှေ့နှစ်ယောက်က ယူရိုပီ ယံတွေဖြစ်သွားပြီး နောက်နှစ်ယောက်က အာရပ်တွေဖြစ်သွားပါတော့တယ်။
ရှေ့ခွဲခြားမှုက နိုင်ငံအပေါ်အခြေခံပြီး နောက်ခွဲခြားမှုက စီဗီလိုက်ဇေးရှင်းကို အခြေခံတယ်။
(The Clash of Civilizations. P 76)
in The Clash of Civilizations, ဇင်ဝေသော် - on 2/11/2014 - No comments
လူ့သမိုင်းဆိုတာကကို ကိုးကွယ်မှုဘာသာတရားတွေရဲ့ သမိုင်း၊ စီဗီလိုက်ဇေး ရှင်းတွေရဲ့ သမိုင်းပါ။
ဒေါက်တာသန်းထွန်းပြောခဲ့တဲ့ သမိုင်းဆိုတာ မြန်မာနဲ့ ထိုင်းကြားက သမိုင်းလောက်တော့ မကတန်ရာ။
in ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ - on 2/11/2014 - No comments
သူ့ရဲ့သမိုင်းလေလား။ "ဓားသွားပေါ်မှာ ကတဲ့ဆပ်ကပ်" ထဲမှာ တာရာမင်းဝေ က
သီဟ စကားပြောဖို့ ခါးဆန့်လိုက်သည်မှာ ကြာပွတ်တစ်ချောင်းဖြေချ လိုက် သည်နှင့်တူသည် လို့ ဥပမာညွှန်းခဲ့တယ်။
တကယ်က တာရာမင်းဝေကိုယ်တိုင် စကားပြောတိုင်း ကြာပွတ်တွေ ဖြေနေ တာပါ။
စစ်ပွဲက ဘယ်သူပဲနိုင်နိုင်၊ ဘယ်သူပဲရှုံးရှုံး
အချိန်တိုတိုနဲ့ ပြီးဆုံးလေလေ ကြားကမြေဇာပင်တွေ သက်သာလေလေပါ။
Switch Seats :)
in ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ - on 2/10/2014 - No comments
in The Clash of Civilizations, ဇင်ဝေသော် - on 2/10/2014 - No comments
တော်တော်အဓိပ္ပါယ်ရှိ၊ တော်တော်လည်း ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ မှတ်ချက် ပါ။ဘုရင်မကို ဖမ်းဖို့ကြိုးစားချိန်မှာ ကိုယ်တိုင်လည်း"ခွ"ချက်မိနေနိုင်တယ်။
မြို့ကြီးတွေပေါ် ရုတ်တရက်တက်လာတဲ့၊ အလယ်တန်းပညာရေးသာအဆင့် ရှိတဲ့ ပထမမျိုးဆက်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ရေးရာ၊ ခံစားမှုရေးရာ၊ ကိုယ်ကျင့်ရေးရာနဲ့ လူမှုရေးရာလိုအပ်ချက်တွေကို အဒမ် စမစ်တို့၊ သောမတ် ဂျက်ဖာဆင်တို့ လည်း ဖြည့်ဆည်းမပေးနိုင်ပါ။ ဂျီးဇက် ခရိုက်လည်း ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှာ မဟုတ်၊ ဒါပေမဲ့ သူ့မှာတော့ အခွင့်အလမ်းပိုရှိနိုင်တယ်။
Neither Adam Smith nor Thomas Jefferson will meet the psychological, emotional, moral, and social needs of urban migrants and first-generation secondary school graduates. Jesus Christ may not meet them either, but He is likely to haveabetter chance.
ရေရှည်မှာတော့ မိုဟာမက်က အောင်ပွဲခံသွားတယ်။ ခရစ်ယန်ဘာသာ ပြန့်နှံ့ တာက သူများဘာသာဝင်တွေကို ကိုယ့်ဘာသာထဲ သွတ်သွင်းလို့၊ အစ္စလမ် က သူများဘာသာဝင်တွေကို ကိုယ့်ဘာသာထဲလည်း သွတ်သွင်းတယ်၊ မွေး လည်း မွေးထုတ်တယ်။
(The Clash of Civilization. p 65.)
in ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ - on 2/09/2014 - No comments
"ဘာသာဘေဒဆိုတာ ဒီလို နားလည်ရမယ်လို့ သင်ပေးခဲ့တဲ့
ဆရာကြီး ဦးမြင့်ဆွေ မဟာဝိဇ္ဇာ
(လန်ဒန်)ဒီနေ့ ကွယ်လွန်သတဲ့" တဲ့လား။
ကိုယ့်စကားကို ပြန်ငှားပြီး ပြောရဦးမှာပဲ
မြောက်ကိုရီးယား (သို့မဟုတ်) ဆင်သေကို ဆိတ်သားရေနဲ့ ဖုံးသူ(၃)
in ဇင်ဝေသော်, လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင် (လီကွမ်ယု) - on 2/09/2014 - No comments
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကမ္ဘာ့ အမြင်
(ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ အိန္ဒိယ)
နောက်ပြီး ဒီ တောင် မြောက်ကိုရီးယားအနေအထားက မတည်မငြိမ် အနေ အထားမျိုးလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ နိုင်ငံအားလုံး ဟာ ဒီပုံစံအတိုင်းပဲ (၁၀) နှစ်၊ အနှစ် (၂၀) ကြာအောင် ရှိနေပါလိမ့်မယ်။ ဘာ မှ အပြောင်းအလဲ မရှိသလောက် ဖြစ်နေမယ်။ နောက်ဆုံးတော့ အနှေးနဲ့ အမြန် မြောက်ကိုရီးယားလူထု ပေါက်ကွဲလာပြီး စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဇာတ် သိမ်းသွားလိမ့်မယ်။ သူတို့ အုပ်ချုပ်တဲ့ စနစ်ကြီးက တကယ့်ကို မခံမရပ်နိုင် စ ရာကြီးမို့ပါ။ ဒီအနေအထားမျိုး မြန်မြန် ရောက်မလာအောင် ကင် (မ်) မိသား စုကလည်း တတ်နိုင်သလောက် နည်းမျိုးစုံနဲ့ ထိန်းချုပ်ဖို့ ကြိုးစားမှာပဲ။ အချိန် အတော်ကြာသည်အထိ ဆွဲထားဦးမယ့် သဘောပါ။ သာမန် မြောက်ကိုရီး ယား ပြည်သူလူထုကြီး ပြင်ပကမ္ဘာနဲ့ ဆက်သွယ်မိသွားမှ အပြောင်းအလဲ က ဖြစ်တော့မယ့် သဘောပါ။
အခုလက်တလောမှာတော့ မြောက်ကိုရီးယားက ကမ္ဘာ့ပြဿနာရှာတဲ့ နိုင် ငံအနေနဲ့ နျူးကလီးယား လက်နက်ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူတို့ကို ပြောနိုင်ဆိုနိုင်တာကလည်း တရုတ်ပြည်ပဲ ရှိတယ်။ တရုတ်ပြည်ကလည်း အခုအထိတော့ နျူးကလီးယားကိစ္စကို လက်လျော့ သွားအောင် မစည်းရုံးနိုင်သေးဘူး။ လက်ရှိစစ်အစိုးရ အာဏာတည်မြဲရေး အတွက် နျူးကလီးယားလက်နက် ပိုင်ဆိုင်ခြင်းဟာ အဓိကကျတယ်ဆိုတာ ကို မြောက်ကိုရီးယားတွေက သဘောပေါက်ကြတယ်။ နောက်ပြီး တရုတ် က တောင်ကိုရီးယားဆီက နည်းပညာနဲ့ အရင်းအနှီးကို လိုချင်ပြီး တောင် ကို ရီးယားနဲ့ ချက်ချင်း ရင်းရင်းနှီးနှီး ပေါင်းလိုက်တော့ တရုတ်ပြည်ကိုလည်း သူ တို့က အကြွင်းမဲ့ မယုံကြည်ကြတော့ဘူး။
မြောက်ကိုရီးယားတွေက နျူးကလီးယားလက်နက်ကို ဖန်လှောင်အိမ်ထဲမှာပဲ ထားပြီး အရေးကြုံမှ ဖန်လှောင်အိမ်ကို ခွဲဖောက်မယ့် သဘောရှိပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ နိုင်ငံတကာကပေးတဲ့ ထောက်ပံ့ကြေးတွေကို ထိုင်ယူနေ ကြ လိမ့်မယ်။ နျူးကလီးယားကိစ္စကို သူတို့ လက်လျော့လိုက်ကြမှာတော့ မဟုတ် ဘူး။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သာ သူတို့နေရာမှာ ဆိုရင်လည်း ဒီတွက်ကိန်းအတိုင်း လုပ်မိမှာပါပဲ။ တရုတ်ကလည်း ကျွန်တော့်ကို ဖိအားတွေ ပေးနေပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော် ကျရှုံးသွားလို့ သူတို့ အကျိုးအမြတ်လည်း မရှိဘူး၊ ဒီတော့ ကျွန်တော်ကရော ဘာဖြစ်လို့ တရုတ်အစိုးရစကားကို နားထောင်နေတော့မှာ လဲ။ ရှေ့မှာ လစ်ဗျားက ပြထားခဲ့တာ ရှိဖူးပြီးသားပဲ။ သူတို့ စိတ်ဝင်စားတာ က နျူးကလီးယားလက်နက် ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေခြင်းပဲ။ လစ်ဗျားက ကဒါဖီ ဆိုရင် အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ စကားကို နားထောင်ပြီး နျူးကလီးယား လက် နက် ပိုင်ဆိုင်ရေးကို လက်လျှော့ခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့ ပြည်တွင်း မငြိမ်မသက်နဲ့ ပုန် ကန်မှု ထဖြစ်ရော။ ပြင်သစ်နဲ့ အမေရိကန်က သူပုန်တွေကို ဝင်ပြီး အားပေး လိုက်တော့ နောက်ဆုံး ၂၀၁၁ - ခုမှာ ကဒါဖီကိုယ်တိုင် သူပုန်တွေရဲ့ သတ်ဖြတ်ခြင်းကို ခံလိုက်ရတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်က မြောက်ကိုရီးယားက ကင် (မ်) မိသားစုကို ထိတ်လန့်စေမှာ အမှန်ပါပဲ။
မြောက်ကိုရီးယားက သောင်မတင် ရေမကျ ဖြစ်နေစဉ်မှာ တောင်ကိုရီးယားကတော့ ပုံမှန် တိုးတက်နေလိမ့်မယ်။ ဒီနှုန်းအတိုင်း နှစ်ပေါင်း အတော် ကြာ ကြာ ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ တောင်ကိုရီးယားက ကမ္ဘာနဲ့ ချိတ်ဆက်မိသွားပြီ၊ အ ထူးသဖြင့် ဈေးကွက်ကျယ်ကျယ်၊ လုပ်အားခချိုတဲ့ ဧရာမ အိမ်နီးချင်း တ ရုတ်ပြည်နဲ့ ချိတ်ဆက်မိသွားပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်က တောင်ကိုရီးယားကို ကျွန်တော်ရောက်တော့ ကျွန်တော်နဲ့ တွေ့တဲ့လူတိုင်း တရုတ်ပြည်မှာ စီးပွားရေး လုပ်ချင်တဲ့ အကြောင်းပဲ ပြောနေကြတယ်။ နောက်ပြီး နိုင်ငံတကာကိုပညာသင်သွားကြတဲ့ ကျောင်းသားအရေအတွက်မှာ တောင်ကိုရီးယားကျောင်းသား အရေ အ တွက်က တော်တော်များတယ်။ ဒါတွေက အနာဂတ်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ ဆက်ဆံရေးကို အားကောင်းစေလိမ့်မယ်။ တောင်ကိုရီးယားရဲ့ အောင်မြင်မှု (၂၁) ရာစု ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ဒီကိစ္စက အထူးအားရစရာ အချက် တစ်ချက် ဖြစ်နေပါတယ်။
LED တီဗွီတွေကအစ တောင်ကိုရီးယားဟာ ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှုမှာ ဦးဆောင်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်နေခဲ့ပြီ။ သူတို့ကုန်တံဆိပ်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ဆမ်ဆောင်း၊ LG၊ ဟွန်ဒိုင်းနဲ့ အခြားကုန်ပစ္စည်းတွေဟာ အောင်မြင်မှု အရှိ ဆုံး နိုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီကြီးတွေ ကြားထဲမှာ ရပ်တည်နေနိုင် ကြပြီ။ နောက် ပြီး သုတေသနနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (RD) မှာလည်း အားကောင်းတယ်။ လူဦးရေ သန်း (၅၀) လောက်နဲ့ ဒီလောက် ကြီးမားတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးတွေ ပေါ် ထွက်လာနိုင်တာဟာ အတော် အထင်ကြီးဖို့ ကောင်းပါတယ်။
ကိုရီးယားတွေဟာ နယ်မြေတစ်ဝှိုက်မှာ အမာဆုံး လူမျိုးစုလည်း ဖြစ်ကြ တယ်။ ကျူးကျော်လာတဲ့ မွန်ဂိုလီးယားတွေကို ဆက်မတိုးနိုင်အောင် ပိတ် ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာ ကိုရီးယားလူမျိုးတွေပါ။ မွန်ဂိုလီးယားတွေ ဂျပန်ကို ဆက် တိုက်ဖို့ ပင်လယ်ရေကြောင်းကို ဖြတ်ကြရမှာဆိုတော့ တော်တော်များများက ကိုရီးယားထဲမှာပဲ အခြေချ နေထိုင်ခဲ့ကြတော့တယ်။ နောက်ပြီး အလယ်ပိုင်း အာရှမှာ တိုက်ခိုက်ရေးစိတ်ဓာတ် အပြင်းပျဆုံး စစ်သားတွေက ကိုရီးယားေ တွပဲ။ တော်တော် မာကျောတဲ့ လူမျိုးတွေပါ။ နောက်ပြီး တောင်ကိုရီးယား လူ မျိုးတွေဟာ ပညာကောင်းကောင်း တတ်ကြတယ်။ မနားမနေ အလုပ်ကြိုးစား မှုအပြင် စူးစမ်းဆင်ခြင်မှုလည်း ရှိကြတယ်။ ဒီအရည်အသွေးတွေကို ဆက် ထိမ်းထားကြလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အတိတ်က အောင်မြင်မှုရှိခဲ့လို့ အနာဂတ်လည်း အောင်မြင်လိမ့်မယ် လို့တော့ ဘယ်အရာကမှ အာမခံချက် ပေးမထားပါဘူး။ ဒီအတိုင်း အောင်မြင်မှု ဆက်ရနေဖို့ဆိုရင် တောင်ကိုရီးယားလည်း အဟန့် အတားတချို့ကို ကျော်ဖြတ်ကြရပါလိမ့်ဦးမယ်။
တစ်အချက်အနေနဲ့ သူတို့ လူဦးရေအတက်အကျကို ဂရုစိုက် စောင့်ကြည့်နေ ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ ကလေးမွေးဖွားနှုန်းလည်း နည်းတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဂျပန်နဲ့စာရင် တောင်ကိုရီးယားက နိုင်ငံခြားသားကို ပိုပြီး လက်ခံတယ်။ ဒါက သူတို့အတွက် အထင်ကရ အားသာချက်ပါပဲ။ နိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ် စီးပွားရေး အားကောင်းနေဖို့ဆိုရင် ကျဆင်းနေတဲ့ ကလေးမွေးဖွားနှုန်းကို တစ်နည်း နည်းနဲ့ ရပ်တန့်နိုင်မှ ရပါလိမ့်မယ်။
ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ အချင်းချင်း ငြင်းခုံတိုက်ခိုက်နေကြတာထက် နိုင်ငံ့စီးပွားရေး ရှေ့ခရီးကို အာရုံပိုစိုက်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုရီးယား လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ အဲဒီရော ဂါက အထင်ကရကြီးပါ။ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ အချင်းချင်းထဲမှာရော ကုမ္ပဏီ ကြီးတွေအချင်းချင်းထဲမှာပါ အမြတ်အစွန်းတွေကို အစိုးရနဲ့ လူထုကို ပြန် လည်ဝေငှ၊ ပေးဆောင်ဖို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော်တော်ကြီး ငြင်းခုံနေကြတတ် ပါတယ်။
ဒါကြောင့် တချို့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကို နိုင်ငံ့အပြင်ထွက်ပြီး လည်ပတ်ဖို့ မောင်း ထုတ်လိုက်သလို ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အဲသလို ငြင်းခုံနေမှုတွေဟာ နိုင်ငံရဲ့ စွမ်းအားနဲ့ အရင်းအမြစ်ကို ကုန်ခမ်းစေပါတယ်။ တကယ်လို့သာ တောင်ကိုရီး ယားလူမျိုးတွေက တညီတညွှတ်နဲ့
“Let’s attack global market together.” (ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်ထဲကို တညီ တညွှတ်တည်း ဝင်တိုးကြရအောင်)
လို့သာ ပြောပြီး တိုးကြမယ်ဆိုရင် ဒီထက် အများကြီး အားကောင်းလာစရာ ရှိပါတယ်။
အမေးအဖြေ ဆက်ရန် …
Cultural questions like these involveayes or no,...
အဖိုးသိမသွားတဲ့ ရေမျက်နှာပြင် ပြဿနာ (ပြန်တင်)...
အဘိဓမ္မာသင်တန်း အမှတ်စဉ် ( ၄/၂၀၁၄ ) @ မင်္ဂလ၀ိဟာရကျော...
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကမ္ဘာ့ အမြင် (ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ အိန္ဒိ...
မြောက်ကိုရီးယား (သို့မဟုတ်) ဆင်သေကို ဆိတ်သားရေနဲ့ ...
အမေရိကန်ပစ္စည်း နဲ့ စီဗီ လိုက်ဇေးရှင်း
ပုဂံက ဖုန်တွေဟာ နှင်းဆီလိုမွှေးတယ်
ဗုဒ္ဓဘာသာ နဲ့ စီဗီလိုက်ဇေးရှင်း
ဝန်ကြီးစွာစော်ကဲ ဟဲ ဟဲ
ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ အိန္ဒိယ ( ၃ )